စာရေးဆရာ *ဓမ္မပါလ* ၏ *သူမရှိ ၊ငါမရှိ ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် ၌* စာအုပ် မှ…
စာရေးဆရာ *ဓမ္မပါလ* ၏ *သူမရှိ ၊ငါမရှိ ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် ၌* စာအုပ် မှ….ထိရှစွာ ခံစားမိသော စာ တစ်ပိုဒ်
• နွားမ တစ်ကောင်သည် မိမိကိုယ် မှ ဖြစ်သော နွားနို့ကို လူအားပေး၍ လူကို အကျိုးပြု သည်။ သေသည် ၏ အဆုံး၌ အသားကို ပေး ၍ လူုကို အကျိုးပြုသည်။ သို့သော်……ထို နွားမသည် *ဒါန တရား* နှင့် တခြားစီဖြစ်ရသည်..။
*ဒါန* ဟူသော အသိဥာဏ် မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။
• နွားထီးတစ်ကောင်သည် လူကျွေးတာကို စား၏ ။ ခိုင်းတာကို လုပ်၏။ မသတ်၊ မခိုး ၊မပစ်မှား ၊ မလိမ် ၊မသောက်စား ဖြင့် အသက်ထက်ဆုံး နေ၏ ။
သို့သော် ..ထို နွားထီိးသည် * သီလ တရား* နှင့် တခြား စီဖြစ်ရ၏ ။
*သီလ* ဟူသော အသိ ဥာဏ် မရှိသော ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ ။
• လူတစ်ယောက်သည် ပစ္စုပ္ပန် (လွတ်ရာ) နှင့်တစ်သားတည်းနေ၏ ။
သို့သော် ထို လူသည် လွတ်ရာ နှင့် တခြားစီဖြစ်ရ ၏ ။
လွတ်ရာ ဟူသော အသိဥာဏ် မဖြစ်သော ကြောင့် ဖြစ်ပါ၏။
ကျွန်ပ် တို့ ၏ ဘဝ သည် လည်း ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် ၌ နေကြပါသည်..။
အတိတ် ၊ အနာဂတ် ၊ပစ္စုပ္ပန် ကာလ သုံးပါး မှ လွတ်နေသော တရားသည် ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် ၌ အမှန်တကယ် ရှိနေပါသည်..။
၄င်း ပစ္စုပ္ပန် တည့်တည့် တရားနှင့် တစ်စပ်တည်း ၊တစ်သားတည်း ဖြစ်နေပါသည် ။
လောကအာရုံ တို့ နှင့်လည်း အာရုံပြု ၍ မရနိုင် ။
၄င်းတရားသည် အချိန်ကာလ မှ လွတ်မြောက်နေသည့်အားလျှော်စွာ …
လောက ရဲ့ ဖြစ်ခြင်း ၊ပျက်ခြင်းမှ လည်း လွတ်မြောက် နေပါ၏။
သိမ်မွေ့စွာ ..အသိရခက်သော သဘောကို ဥာဏ်ဖြင့် ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်ကြပါစေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:04 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် စာရေးဆရာ ဓမ္မပါလ
ရှင်းသန့်စင်ကြယ်သော ၀ါဆိုဦး သို့ ရည်စူးလျက်
(ဤစာစု ဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ တွင်ဝါဆို နေသည့် ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ကျန်းမာချမ်းသာပါစေကြောင်း ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သ လျက် ဦးတင် ကန်တော့အပ်ပါတယ်။ )
ငြိမ်းချမ်းအေးမြသော မိုးရေစက် တို့ နဲ့ လွှမ်းခြုံထားတဲ့ ၀ါဆိုဦးကာလ တစ်ခုကိုကူးပြောင်း ရောက်ရှိ တာကြာခဲ့ပါပကော..။
ဒီတစ်ဝါဆို ခဲ့ရင် တော့မေ့မေ့ ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က များပြားလှ တဲ့ ရန်ကုန် မှာ တပည့် ဒါယိကာ ဒါယိကာ မများပရိသတ်ကို ထားရစ်ခဲ့ကာ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ၀ါဆိုလျက်ရှိနေတာ မို့ ဒီနှစ်တော့ ၀ါဆိုသင်္ကန်း ကပ်လှူဒါန်းခွင့် မရနိုင်တော့ ပြီကော..။
ဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင် ရဲ့ အရိပ် နဲ့ဝေး နေကာမှ….ကျေးဇူးဆပ်လိုလျှင် ဆုံးမသွန်သင်တဲ့အတိုင်း ကျင့်ကြံနေထိုင်နိုင် အောင်ကြိုးစား ဘို့ကို သတိရမိပါတယ် ..ကလေးတို့ရေ..။
မေမေ ကတော့ မေမေ နှစ်ရှည် လများ သင်ယူလေ့ကျက်လာတဲ့ လောကီစာပေ တွေ ဟာ မေမေ့ကို မာန တရားတွေ နဲ့ နိမ့်ကျ စေမှာ… ဂုဏ်မောက် တဲ့စိတ် နဲ့ ပလွှားနေမိမှာ စိုးလှပါတယ်..။
သတိဆိုတာကလည်းအခါခပ်သိမ်း တည်ရှိ နိုင်နေတာမဟုတ် လေတော့ တစ်ခါတခါ ကျေးဇူးတရား ကိုမေ့ တတ်တဲ့ မမြင်မိတဲ့အခါ မာန ဆိုတာ မိုးရေစက်တွေကြောင့် ပေါ်လာတတ်တဲ့ မှိုပွင့်လေးတွေလို ပေါ်ပေါ်လာတတ်တာ အမှန်ပါပဲကလေးတို့ရေ..။
ကျေးဇူး တရား ကိုမြင်အောင်ကြည့် ဘို့ သင်ကြားပေး ခဲ့သော်လည်း တကယ်တမ်းကျရင်မာန လက်နက်ကိုသာ ထုတ်ထုတ် သုံးတတ်တာ အကျင့်ပါနေခဲ့ပါ တယ် ကလေးရေ..။ မာန နဲ့ အတူ အပြစ်တင်လိုစိတ် မကောင်းမြင်စိတ်တွေပါလာတော့ နှုတ်နဲ့ဖြစ်စေ..စိတ်နဲ့ ဖြစ်စေ ပြစ်မှား မိတာပေါ့နော်..။
မသိနားမလည်လို့ ပြစ်မှားများမိတဲ့ ကာယကံ ဝစီကံ မနောကံတွေကို Computer ထဲက File ဟောင်းတွေရှင်း လင်းပြီးDelete လုပ်သလို ရှင်းပြစ်ရပါလိမ့်မယ်..။
ပြစ်မှားမိသူများကို တောင်းပန်ဝန်ချမှုနဲ့ အတူ ကိုယ့်ကို ပြစ်မှားသူများကိုလည်း ခွင့်လွှတ်စိတ်နဲ့ အတူ Delete လုပ်ကြရပါလိမ့်မယ် ကလေးတို့ရေ…။
ခင်ပွန်းကြီး၁၀ပါးကန်တော့ပွဲနဲ့ အတူသားသားနဲ့ မီးမီးတို့ကို အမှတ်တရဖြစ်စေမဲ့ စကားလက်ဆောင်ပါးရအောင် သည် တစ်ခါ သမိုင်းကြောင်းလေးကို ရေးဘို့ စဉ်းစားမိခဲ့ပါတယ်..။
သည် ခင်ပွန်းကြီး ၁၀ပါး ကန်တော့ပွဲ ကျင့်စဉ် သည် ဘုရားဟော တရားများကို မှတ်တမ်းတင် ထားတဲ့ ပိဋကတ်သုံးပုံတွင် မပါဝင်ပါ ကလေးတို့ရေ..။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ် တွင် ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ် ကို သားတို့ကို ပြော ပြချင်ပါတယ်..။တစ်ခါ က ရဟန်းနှစ်ပါးဟာ အတူ ဆွမ်းခံထွက် ကြတာ…။အသက် ကြီးတဲ့ ရဟန်း ဟာ လေနာရောဂါရှိတော့ ဆွမ်းခံပြန်ရာ လမ်းတစ်နေရာရဲ့ လမ်းပေါ်မှာ ပဲ ယာဂုဆွမ်းကို မော့သောက် ဘုဉ်းပေးလိုက်ပါတယ်..။ဒါကို ရဟန်းငယ် ကစိတ်ထဲက တွေးမိသတဲ့..။
လမ်းမှာတောင် မအောင့်အီးနိုင်ပဲ သောက်တာဆိုတော့ (အသက်ကဖြင့်ကြီးလှပြီ…ကျောင်းရောက်မှသောက်တာ မဟုတ်..သည်လို ဘုန်းကြီးမျိုး ရှိလို့ တို့သာသနာ ရှက်စရာကောင်းတာ)လို့ စိတ်ထဲက ကဲ့ရဲ့ပါတယ်..။သူ့ရဲ့ စိတ်အတွေးကို ယာဂုဘုဉ်းပေးတဲ့ ရဟန်း ကြီးကသိတော် မူတဲ့ အတွက်…နှုတ်က ဖွင့်မေးပါတယ်..ငါ့ရှင် သာသနာ မှာ ထောက်ရာ တည်ရာ ရခဲ့ပါပြီလားလို့မေးတဲ့ အခါ….ရဟန်းငယ်က သောတာပန်တည် ပြီးပါ ပြီ..လို့ ပြန် ဖြေပါတယ်..။
တရားဆက် အားမထုတ်နဲ့တော့လို့ ပြန်ပြော ပါတယ်.. အရိယာ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ပြစ် မှားမိခဲ့တာ ဖြစ်သွားတာ ဆိုတာကို ရဟန်းငယ်က ချက် ချင်းသဘော ပေါက်ပါတယ်..။
ထိုရဟန်းသည် ရဟန္တာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ ချက်ချင်းသိသွားတော့ ချက်ချင်းတောင်းပန် ကန်တော့လိုက် တာ သူ့ရဲ့ အပြစ်ဟာချက်ချင်း ပြေပျောက် သွားခဲ့ရပါတယ်..။
ဝိသုဒ္ဓိမဂ်လာ သည် ဇာတ်လမ်းလေးကို အခြေခံ ပြီးတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု နယ်ပယ် မှာ ထည့်သွင်းပေါင်းစပ်ပြီး မာန်လည်ဆရာတော် ဘုရားတို့ တခြားသောဆရာသမားများက သည် လင်္ကာလေးကို ရေးသားခဲ့ပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
အရိယာဇာတ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကို၊ပြောတတ်ပြစ်ဆို၊ အမျက်သို၍
ချို့ယွင်းအင်္ဂါ၊ နူနာ ကုဌ
လု့ဘောင် ဒိဌ ၊ တွေ့ ကြုံရ၍
သေကမလွဲ၊ အပါယ်ငရဲဝယ် ကမ္ဘာစွဲ၏..။
ရောက်ဆဲလူ့ပြည် တက် ပြန်လည်သော်..။
အမြဲကြမ္မာ ဝဋ်ကြောင်းပါသည်…ရှောင်ရန် ဓမ္မအန္တရာယ်တည်း။
မေမေတို့ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား စာ အုပ် မှာကတော့ အလယ် အပိုဒ်ကို ဖေါ်ပြ ထား ပါတယ်..။
ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကျောင်းကတရားစခန်းပွဲတွေမှာ…မဂ်ဉာဏ် ဖိုလ်ဉာဏ် လက် လှမ်းမှီဘို့ အတွက် တားမြစ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ ပြစ်မှားကံတွေပြေပျောက်အောင် သစ္စာလေးပါးမဟောခင် ညနေမှာ အမြဲစီစဉ်ကန်တော့စေတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
သည်ကဗျာကို ဓမ္မစေတီဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ဆရာ တော် ဦးဥက္ကံသဗုဒ္ဓိက လွန်ခဲ့ တဲ့ အနှစ်၇၀ကျော် ကတည်း ကရရှိ ထိမ်းသိမ်းထားပြီး ဆရာတော်ကို ပေးခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတယ်..။မူရင်းကို ဓမ္မစေတီဆရာတော်ဘုရားက ထိန်းသိမ်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်..။
အခုခေတ် တွင်တွင်ကျယ် ကျယ် ဖြစ်နေတာ ကတော့ ယခု နိုင်ငံတော် သံဃာ့ဝန်ဆောင်ဆရာတော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဖျာပုံတိုက် သစ်ဆရာတော် ဦးသြဘာသာဘိဝံသ ရေးသားတဲ့ သုတေသနရုပ်ပြ အဘိဓာန်မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တာ ကို ကိုးကားကြတာ လို့ ဓမ္မစေတီဆရာတော် က ဆိုပါတယ် ကလေးတို့ရေ..။
အဲဒီဆရာတော်ဘုရားကိုးကားသော ဇာတ်ကလည်း တေမိဇာတ်ကိုမှီ ငြမ်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်..။အဲဒီတေမိဇာတ်မှာလည်း ခင်ပွန်းကြီး၁၀ပါးရယ် လို့ တိတိကျကျရေတွက်ပြမထားပါဘူး..။မိဘ နှစ်ပါးကို စိတ်ဆင်းရဲစေမှု မပြုပါနဲ့လို့သာ ပါပါတယ်..တဲ့..။
လူတွေဟာ မစ္ဆရိယ စိတ်ရှိကြတဲ့ အတွက် သူတစ်ပါးကိုပြစ်မှားတတ်ပါတယ်..။
အဲဒီ မစ္ဆရိယ (မိမိစည်းစိမ်ကို လှို့ဝှက် ဝန်တိုခြင်း)ကြောင့်အရိယာတို့ကို စွပ်စွဲခြင်းဆိုတဲ့ အရိယူပဝါဒကံ ထိုက်တတ် လို့ ရှေးဆရာတော် ဘုရားကြီးများ က လောကနီတိ အဖြစ် ချန်ထားခဲ့တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာပါပဲ..။
အခု သည် နည်းကို သင်ကြားဆုံးမပေးတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီး က တရားမဟောခင် မှာ ၆နှစ်လောက်လက်တွေ့စမ်းသပ် ပြီးမှ တောတွေမှာ စဟောတာ..အထောက် အထားများစွာ မှတ်တမ်းတင် ပြီးသားတွေရှိနေပါတယ်..။
ဆရာသမားရဲ့ ဆုံးမ မှုကြောင့်အသက် ၅၀ကျော်မှာ မှမြို့ပေါ်တက်ခဲ့တယ်..နောက်တော့ရဟန္တာ ကြီးများရဲ့ အိမ်မက်ပေးချက်အရ..နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေ ကို ပါ ဆရာတော် ရောက် ရှိဟော ကြားခဲ့လို့ မေမေတို့ ကံကောင်းစွာ ရရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ် ကလေးတို့။
တကယ် လို့ ဓမ္မစေတီဆရာတော် က ကျမ်းကိုးကျမ်းကားနဲ့ထောက် ပြပြောဆိုခဲ့ရင်လည်း ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကြီးက လက်ခံမှာ ပါပဲ.. မာန်မာန မှ မရှိတော့တဲ့ အပြင် ကျေးဇူးတောင် တင် အုံးမှာ ပါပဲ..။ပြောပြပြီးလောက်ပြီလို့ယူဆရပါတယ်..။
ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ဓမ္မစေတီဆရာတော် ဘုရားရဲ့ ထက်မြက်မှု နဲ့ ပိဋကတ်စာပေ ကျွန်းကျင်မှုကို ချစ်ခင် မြတ်နိုးတာ ကို သူတို့ နှစ်ဦး မုံရွာကို တရားဟော တူတူ သွားခဲ့တာ ၊ရင်းနှီးခဲ့ကြတာ တရားတွေထဲမှာမေမေ နာယူရဘူးပါတယ်..။
ဓမ္မစေတီဆရာတော် ကလည်း ရိုးသားတဲ့ စကားတစ်ခွန်းမိန့်ဘူးတယ်..သူဟောတဲ့ တရာေးတွက စာပေကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒေသနာ ဉာဏ်နဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်တာဖြစ်တယ်..ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကတော့ ကိုယ်တိုင် ထိုးထွင်းသိတဲ့ ပရိဝေဒဉာဏ် နဲ့ ဟော တာလို့သူ့ရဲ့တရားတစ်ပုဒ်မှာ ဟောဘူးပါတယ်..။
ခြုံငုံပြီး ပြောရရင် ..မေမေ ကြိုက်တဲ့ အချက် ကတော့…အခိုင်အမာ ပြဆိုထားတဲ့ ဘုရားဟောတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်...။ ဘဝသံသရာရှည် လွန်းလို့ မတော်ဘူးတဲ့ ဆွေမျိုး၊အမိ အဖ မရှိ..။ထို့ကြောင့် လောက ၌ ပြစ်မှားခြင်းငှာ ထိုက်သော သူ ဆိုတာမရှိလို့ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကပြဆိုတာကို ပါ..။
အဲဒီ အသိလေးဝင်လာတော့…မေတ္တာ တွေပွားရတာ အလွန် လွယ်ကူလာ ပါတယ်..။တစ်ဦးနဲ့ တစ်ဦးဟာ မဆိုင်သလို ခြံစည်းရိုးခြားမနေတော့ပဲ တစ်လောကလုံးရှင်းလင်းတဲ့ အမြင်နဲ့..လုံခြုံနွေးထွေးလာပါတယ်..။
ကျေးဇူးမြင်ရင် မေတ္တာပေါ်သည်။ ကျေးဇူးပျောက်ရင် မာန ပေါ်သည်..။
မေတ္တာ ဖြစ်ပေါ်စေသော အနီးကပ်ဆုံးအကြောင်းရင်းသည် ကျေးဇူးကိုဖေါ်ပြပေးခြင်းဖြစ်သည်..။
မေတ္တာနဲ့ကျေးဇူးတရားကို ကျွမ်းကျင်သွားတော့ လောကီအောင်မြင်ရေးလှို့ဝှက် ချက် တံခါးတစ်ချပ်ပွင့်သွားတဲ့သဘောလို့ပဲမေမေခံယူပါတယ်..။မေမေပထမရေးခဲ့ဘူးသလို..
ပထမမေး ခွန်းရဲ့ အဖြေက..သာ မာန် လူသား ဘ၀ကနေ ၃၂ပါး သော ယောင်္ကျား မြတ်တို့လက္ခဏာဖြင့် ပွင့်ထွန်းတော် မူသော ဘုရား အဖြစ်သို့ရောက်အောင် ဖြည့် ဆည်း ခဲ့တဲ့ ၁၀ပါးသော ပါရမီ ကို ဖြည့်ကျင့်ရမယ် တဲ့…မေမေက ဆရာတော် အရှင် ဆန္ဒာဓိကတရားတော် ထဲက နေ ဆရာတော် ကျက် ခဲ့ သလို မှတ်ရလွယ်အောင်..
ဒါန၊ သီလ၊ နေက္ခမ္မ ၊ပညာ့ ၊၀ိရိ ယာ။
ခန္တီ ၊သစ္စ၊ ဓိဋ္ဌာန ၊မေတ္တ၊ ဥပေက္ခာ..။
မေတ္တာ ရဲ့ အရှိန် အဟုန် နဲ့.. အပင် ပန်းတွေ ခံ နိုင် တော့ ခန္တီ ပါရ မီ ဖြစ် သွားတယ်..။အာရုံခံစားမှုများကို ကိုယ် ခံစား မယ် သုံးဆောင်မယ် ဆိုတဲ စိတ်ကို ချိုး နှိမ် နိုင်တော့ နိက္ခမ ပါရမီ ဖြစ် သွားတယ်..။မဖြစ် ဖြစ်အောင် လုပ် မယ် ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ဆိုတော့ အဓိဌာန ပါရမီ တွေ..ဖြည့် ကျင့်ရာရောက် ပါတယ်..။ထမြောက်အောင်မြင်အောင်လုပ်တော့ ဝီရိယပါရမီ ဖြစ်သွားပါတယ်..။
ဉာဏ် နဲ့ ချဲ့ ထွင် စဉ်းစားကြည့်ပါနော်..ဒါဆို.. ပထမမေး ခွန်း ရဲ့ အဖြေ ရပါ ပြီကလေးရေ…။
နိဂုံးချုပ်ရရင်တော့ ပါရမီကျင့်စဉ် တစ်ခု အဖြစ်လည်းကောင်း၊ မိမိကိုယ် ကို နှိမ့်ချတောင်ပန် ခြင်း။ပူဇော်ထိုက်သူကို ပူဇော်တဲ့ မင်္ဂလာ တရားတော် နဲ့လည်းကိုက်ညီတဲ့ ကျင့်စဉ်လေး အဖြစ်ဝါဆိုဦးးအချိန် ကာလသမယမှာ တန်ဘိုးထားလုပ်ဆောင် ကြတာပေါ့ကလေးတို့ရေ..။
အပြစ်များမှရှင်းသန့်စင်ကြယ်သော ကလေးများ ဖြစ်ကြပါစေ…။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 11:55 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
သားသမီးများ နှင့် တပည့်တွေ ကို ကိုယ့်ထက် သာလွန် ကောင်းမြတ် လိုတဲ့ စိတ် လွှမ်းမိုး ကာ* ငါ့အလို * ကဒီလို ဆိုတာ မျိုး ဖြစ်လေတိုင်း ကျွန်မမှာ ဆူတတ်သော ၊ အပြစ်ပြော ဆိုတတ်သော သူတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
အပြစ်ကို ထောက်ပြ ခြင်း ၊ ဆူပူကြိမ်းမောင်း ခြင်း ရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရလဒ် သည် ဝမ်းနည်းခြင်း မှ နာကြင်ခြင်း၊ နာကြင်ခြင်း မှာ နာကျည်းခြင်း သို့ ကူးပြောင်း သွားတတ်တာ ကလွဲပြီး ဘာ မှ တိုးတက် မလာ ကို သိတဲ့ အခါ မှာ တော့ ထိန်းသိမ်း..သိမ်းဆည်း မိ အောင်ကြိုးစားလာ နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
တကယ် တော့လည်း စာမေးပွဲ ကျ သူတစ်ယောက် ဟာ… သူတပါး လို အောင်မြင်ချင်စိတ် အရှိဆုံး ဟာ သူကလွဲ ပြီး ဘယ်သူမှ မဖြစ် နိုင်ပါ..။
ယူကြုံးမရ..ဆုံးရှုံး ရလေခြင်း ဆိုတဲ့ စိတ် ဟာ ကိုယ့်ကိုကို ထာဝစဉ် နှိပ်စက်နေတတ်တာမျိုး ပါ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဂျုံးဂျုံးကျ ဆရာတော် ဘုရားကြီး မိန့် ခဲ့ဘူးတဲ့ စကားလေးတစ်ခု ကျွန်မ သွားသတိရ မိပါတယ် ပညာရှိ နဲ့ လူမိုက် တခြား မှာ သွားမရှာ ပါနဲ့ တဲ့…ကိုယ့်သန္တန် မှာ တစ်လှည့် စီ ဖြစ်နေတာ တဲ့..*အချိန်ပိုင်း လူမိုက် ၊ အချိန်ပိုင်း ပညာ ရှိ * တွေပေါ့ တဲ့..။
လူမိုက် ဖြစ်စဉ် တစ်ခဏ မှာ ကျူးလွန် မှားယွင်း ခဲ့တာတွေ ဟာ ပညာရှိ စိတ် ဖြစ်တဲ့ အချိန်ပိုင်း အလှည့် ရောက်ပြန် တော့ သူများတွေ တင်အပြစ်တင်တယ်ဆိုတာ နည်းပါသေးတယ်..။
မိမိကိုယ် မိမိ အပြစ်တင်စိတ် က ထပ်တလဲလဲ ကို တင်မိ..နေတာပါ..။ သတိရအောက်မေ့နေခြင်း ရဲ့ ဖိစီးနှိပ်စက်မှုကို ခံနေရတော့ တာပါပဲ..။
ဝိပါက် ကြမ္မာ ဆိုတဲ့ သဘာဝ ၊လောကနိယမ တရားသူကြီး က လည်း ဘုရားရှင်တောင်မှ ရှောင်လွှဲ တော် မမူ နိုင် အောင် အကွက်စေ့စေ့ စီရင် ဆုံးဖြတ်တော်မူပါသေးတယ်..။ဒီတော့ ကျွန်မ တို့ က ပါဝင် စီရင်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်..။
လှူကြတန်းကြ ပူဇော်ကြတယ် ဆိုတာ ကလည်း ထို အချိန် က ပညာရှိ ဓာတ်ကိန်းဝပ်ချိန် နှင့်ထိုက်တန်ခဲ့ပေသမို့ သဒ္စ္ဒါ ထက်သန် ခဲ့ ကြပေတာ မို့ လှည့်ဖျားတယ် မဆို သာပြန် ။
ကုသိုလ် ဆိုတာ က ဘယ် နားမှာ ဖြစ်တာ လဲ………. မိမိ စိတ်နှလုံး ဟဒယ ဝတ္ထု မှာ..
ကုသိုလ် က ဘယ်အချိန်မှာဖြစ်တာလဲ …….. စိတ် နဲ့ အာရုံ အဆင်ပြေ တဲ့အတွက်.ကြည်လင် အေးမြ ငြိမ်းချမ်း နေတဲ့ အချိန်မှာပါ..။
ကုသိုလ် က ဘာကြောင့် ဖြစ်တာလဲ ……….*ယောနိသော မနသိကာရ* ဆိုတဲ့ သင်တင့်လျောက်ပတ်အောင် ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်း နိုင်လို့ ဖြစ် ခဲ့တာပါ..။
ဒီတော့ စိတ်နှလုံးသားတည်ရာ ဟဒယ ဝတ္ထု မှာ အေးမြကြည်လင် တဲ့ ကုသိုလ် ဆိုတဲ့ ..အအေးဓာတ်အဟုန် ဟာ ထွက်ပေါ်လာ ခဲ့ပါတယ်..။
ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ၊ ပေါ်ထွက်ခြင်း သဘော တွေပါတာ မို့ *အအေးဓာတ်အဟုန်* လို့ ဆိုကြောင်း ကုသိုလ် ရဲ့ သဘောကို ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က မိန့် ကြား တော် မူ ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
နောက်ပြီး ဒီလောက ကို တစ်မျိုးတည်း ရယ်လို့ သိမ်းဆည်း ရှုမြင် နိုင်ခဲ့ တယ် ဆိုရင်ဖြင့် အရှုခံ အာရုံ ခန္ဒ္စာငါးပါးသာ ဖြစ်တာ မို့..ဖြစ်ပြီး တဲ့ နောက် က ပျက်ခဲ့ ပြီး ပါပြီ..။လှူဒါန်း သောသူများ လည်း ကုသိုလ်အဟုန်များ ဖြင့် အေးမြ ကြည်လင် ခဲ့ပြီး ပြီ မဟုတ်ပါလော..။အကျိုးများ စွာ ထင်ဟပ်ခဲ့ပြီး ပြီမဟုတ်ပါလော..။
ဝိပဿနာ သဘောတရား အရ လည်း အတိတ်သည် ဘယ်တော့မှ ပြန်မလာ ၊ အနာဂတ်ဆိုတာ ဖြစ်မလာ သေး ဘူး၊ ပစ္စုပ္မန် ဆိုတာကလည်း စက္ကန့်မလပ် ပြောင်းလဲ နေတာ မို့ ဖြစ်ပြီး ပျက်တတ်တဲ့ သဘော တွေက တရံ မစဲ လွန် ဆင်းရဲ လှပါတယ်..။
အပူဓာတ်အဟုန်များ နှလုံးသားမှာ ထွက်ပေါ်လာအောင် တွေး လိုက်တာ နဲ့ ကျွန်မ တို့ အကုသိုလ် ဖြစ် ရပါပြီ..။
ထို အပူဓာတ်ကို အများသူငါ အားကူးစက်စေခြင်း သည် မီး ပွား မှ မီးပုံ ဖြစ်အောင် လောင်မြိုက်လိမ့် မည် မဟုတ်ပါလော..။
နောက် ဆုံး ကျွန်မ တို့ အားလုံး ကို အယူခံ ဝင်ခွင့် လုံးဝ မရှိအောင် လွှမ်းမိုး အနိုင်ယူ မဲ့ သူ တွေကလည်း စောင့်နေပါတယ်…။ ဇရာ ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏ ၊ အို နာသေ ဘေး ဆိုတာ တွေပါ..။
မနက်ဖြန် လောက်မှာ များ လူ့လောက ထဲက အပြီး အပိုင် ထွက်သွားမယ် လို့ သိလိုက်ရရင် ကျွန်မ တို့ ကျေးဇူး တရားတွေကို သတိရဆင်ခြင် မိကြ ပါလိမ့်မယ်..။
ထိရှကြေကွဲ လွယ် လှသော ကြက်ဥတစ်လုံး လို ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင် ရပ်တည် ရသော သူအဖို့ ကိုယ့်ကို လာထိသမျှ ကိုယ်က သာထိရှ အက်ကွဲ တစ်စစီကြေကွဲ ရတာလည်း အမှန်ပါပဲလေ..။
ကြက် အကောင်ပေါက် ခွင့် မရှိတော့သော…… တွန်သံ မြည်ကြွေး ခွင့်မရှိ တော့ သော ဘဝကို ကြည်ရှု ခံစား ၊သုံးသပ် ဝေဖန် သူများစွာ တို့ ထက် ထို ကြက်ဥလေး က ပိုလွန် ကြေကွဲ နေမယ် လို့ ကျွန်မက တွေးထင်မိ ရင်း…………………………။
အရာရာကို နားလည် တတ်ခြင်း ၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ဖြင့်အေးမြ ငြိမ်းချမ်းရပါစေသား ။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:50 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ဆရာတော်သို့
ဘုန်းဘုန်း အရှင် မဏိဇောတာလင်္ကာရ ( ရှင်မားရု) ၏ သြဝါဒ မွေးနေ့လက်ဆောင်
(ခရီး ထွက် တာတွေ နဲ့ အချိန် မကုန်ဘို့ ဆုံးမထားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်.. ကျေးဇူးပါဘုရား၊ ဦးတင်လျက်)
တစ်က ပြန်စဖို့မလိုတဲ့ ရင့်ကျက်မှုနဲ့တင် မဂ်ပေါက်ဖိုလ်ဝင်တွေလ­ို ထင်းကနဲ။
ကုမာရမာတာနဲ့ သစ္စ္စာအလင်းကြားက ခြားနားချက်ဟာ အာမခံကဒ်ပြားမှ မဟုတ်တာ။
မြင်အောင်ကြည့်ရင် ပါရမီမှတ်တိုင်မှာ ရပ်စောင့်နေတာ တွေ့မယ်။
သူမရဲ့ တကယ့်အလှကိုပါ ...
ခုလည်း အဲဒီတွန်းအားတွေနဲ့ လေယာဉ်မှူးကြီးခြေရင်­း သုံးအချိုးနှစ်နဲ့ အလှတရားကို တွက်စစ်နေတုန်း။
(၅၂) နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ရှင် သစ္စ္စာအလင်းသို
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:42 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စွန့်ခွာ ထားရစ်….( အရှင်ကောဏ္ဍည သို့ ပူဇော်ဦးခိုက်ခြင်း)
ဆရာ တော်ဝင်နွယ် ရဲ့ (သူတော်ကောင်းတို့ နှလုံးသား- စာ -၂၅-၃၅) ကို ဖတ်ရှု လျက် ပြန်လည် ရေးသား ပူဇော် အပ်ပါသည်။
စွန့်ခွာ ထားရစ် တယ် ဆိုတာ မချစ်လို့ မှ မဟုတ်တာ…။ အဝေးကိုပြေး ထွက်တယ် ဆိုတာကလည်း အနားမှမနေချင် လို့ မဟုတ် ဘူးဆိုတာ ..လောက သဘာဝ ရှိတတ်ကြပါတယ်..။
ရယူပိုင်ဆိုင် လက်ဝယ် ပိုင်နိုင် လေတိုင်းလည်း အောင်မြင် တဲ့သူလို့ သတ်မှတ် ရမယ် မထင်မိပါဘူး..။
မွန်မြတ်စွာ ဝေး ခဲ့ကြတဲ့….ဝေးခြင်း… များ စွာ…..
စိတ်သန့်စင်ကြည်နူး စွာ စွန့် လွှတ်ခဲ့တဲ့…စွန့်ခြင်း များစွာ ..
ရှိကြလေတယ် ဆိုတာ ကျွန်မ က နှလုံးသားနဲ့ ထပ်တူပြု ကာ..ယုံကြည် ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ဒီ နေ့ ဝါဆိုလပြည့် အခါသမယနေ့ ကလေးမှာတော့ ကိုယ့်နေရာ ၊ကိုယ့်အတ္တ ကို စွန့် လွှတ်ခဲ့သူ တစ်ဦး ရဲ့ သူတော်ကောင်း နှလုံးသားကို ကျွန်မ က ညွတ်ညွတ်နူးနူး ပူဇော် ချင်မိပါတယ်..။
ထိုသူတော် ၊ သူမြတ် တစ်ပါးကတော့ ဝါဆိုလပြည့် နေ့ မှာ သောတာပန်တည် ခဲ့တဲ့ ပထမ ဆုံး သောတာပန်လူသား… ဧဟိဘိက္ခူ ဖြင့် ပထမဆုံး လူသားရဟန်း ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ ရဟန္တာ အရှင်မြတ် အရှင် ကောဏ္ဍည ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ရဲ့ ဂေါတမ ဘုရားရှင် ဖွား မြင်တော်မမူခင် ကပိလဝတ် နေပြည်တော် မှာ *ဒေါနဝတ္ထု * မည် တဲ့ ပုဏ္ဏ္ဏား ရွာ မှာ ဗြာဟ္မဏ မဟာ သာလ အမျိုးမှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး မိသားစု အဆက်အနွယ် နာမည် တိုင်း *ကောဏ္ဍည * လို့ ထင်ရှား ခဲ့ပါတယ်..။ ငယ်နာမည် ရင်းက *ယည* ဖြစ်ပါတယ်..။
ကောဏ္ဍည လုလင် ဟာ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ဗေဒင်သုံးပုံကို အကုန် အစင်သင်ကြားပြီး မဟာပုရိဿ လက္ခဏာတော် ကျမ်း ကို အကုန် အစင်တတ်မြောက် တဲ့သူပါ..။
ယောက်ျား ကောင်းယောက်ျားမြတ် တို့ ရဲ့ ကြန်အင်လက္ခဏာ နှင့် အကျိုးအပြစ် ကိုေ ဟာကြားတတ်တဲ့နေရာ မှာ တစ်ဘက်ကမ်းခတ်အောင်ကို တော်ခဲ့ပါတယ်..။* ဧကန် စင်စစ် ဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ် * လို့ သူများနဲ့ မတူ ပြတ်သား ရဲဝံ့ စွာ ဟောကိန်းထုတ် နိုင်ခဲ့ သူလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ကောဏ္ဍည လုလင် ဟာ အရွယ် ကြီး လာတော့ သူဟောကိန်းထုတ်တဲ့အတိုင်း မြတ်စွာ ဘုရားကို စောင့်ဘို့ တခြားသောပုဏ္ဏား ကြီး တွေ ရဲ့ သား-၄ ဦး နဲ့ အတူ ရဟန်းပြုခဲ့ကြပါတယ်..။
ဝါဆိုလပြည့် နေ့ မှာ သောတာပန်တည် ခဲ့တဲ့ ပထမ ဆုံး သောတာပန်လူသား…အရှင်ကောဏ္ဍည ဟာ မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ် ။ ဝါဆိုလပြည့်ကျော် - ၅ရက် နေ့ မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့ အနတ္တလက္ခဏသုတ္တန်အဆုံး မှာ ရဟန္တာ အဖြစ်ကို ရောက်တော် မူ ခဲ့ပါတယ်။ ရဟန္တာ ဖြစ်ရာ မှာလည်း ပထမဆုံး ပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ တစ်သိန်းကာလ မှာ ပဒုမုတ္တရ မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ရဲ့ ခြေတော်ရင်း မှာ သစ္စလေးပါးမြတ်တရားကို ထိုးထွင်းသိတော်မူ တဲ့ သူတွေ ထဲ မှာ ပထမ ဆုံး ၊ အဦးဆုံး ၊ အမြတ်ဆုံး ဖြစ်ရပါစေ ဘုရား လို့ ဆုချွေ ပန်ရွယ်ခဲ့ တာကြောင့်မို့ ပါ။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ သာသနာ မှာ အဂ္ဂသာဝက ၊ မဟာသာဝက ၊ ပကတိသာဝက ရဟန်းသံဃာ တွေ စုံ ညီစွာ ဖြစ်ပေါ်လာ တဲ့အခါ မှာ ဆွမ်းခံချိန်မှာ သာဝက အားလုံး ဝါစဉ်အတိုင်း ဘုရားရှင် ရဲ့ နောက်တော်ပါး ကနေ ကြီးစဉ် ငယ်လိုက် ဆွမ်းခံကြွ တော်မူကြရပါတယ်..။
မြတ်စွာ ဘုရားရှင် တရားဟောကြား တော်မူတဲ့အခါ မှာတော့ သံဃာစင် ရဲ့ အလယ် ဗဟို တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓါသန ဓမ္မပလ္လင်တော် မှာ ဘုရားရှင် ထိုင်တော်မူပါတယ်..။
လက်ျာ နံပါး မှာ ဓမ္မသေနာပတိ ၊ အရှင်သာရိပုတ္တရာ ၊ လက်ဝဲနံပါး မှာ ဓမ္မပုရောဟိတ ၊ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် ထိုင်တော်မူကြရပါတယ်..။
အဲဒီအဂ္ဂသာဝက မထေရ် နှစ်ပါး ရဲ့ နောက်ကျောဘက် မှာ အရှင် ကောဏ္ဍည အတွက် နေရာခင်းထားပြီး ၊ ကျန်ရဟန်းတော် တွေဟာ အရှင်ကောဏ္ဍည ကို ဘယ်ညာဝန်းရံကာ ထိုင်တော်မူ ကြရပါတယ်..။
အဲဒီအဂ္ဂသာဝက မထေရ် နှစ်ပါး တို့ ဟာ အရှင် ကောဏ္ဍည မထေရ်မြတ် ဟာ သာသနာတော်မှာ အဦးအစ ၊ ပထမ ဆုံး သစ္စာလေးပါး ၊တရားသိသူ ဖြစ်တော်မူတာကြောင့် ရယ် ၊ အရွယ်တော် အားဖြင့်လည်း မိမိ ထက် ကြီး သူ ဖြစ်တာကြောင့် အလွန်မြတ်နိုးတန်ဘိုး ထားကြပါတယ်..။
ဒါကြောင့် သူတို့ ရှေ့ ဆုံး နေရာ ဦးမှာ ထိုင်နေကြရပေမဲ့ ချစ်ကြောက်ရိုသေ ဖြစ်ကာ မဝံ့မရဲ ရှိတော်မူကြသလို ၊ ရှက်နိုးအားနာ တော်လည်းမူကြပါတယ်..။
ထိုလို အခြေအနေမျိုးကို ရိပ်မိသိရှိတော်မူ တဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍည ဟာ အဲဒီအဂ္ဂသာဝက မထေရ် နှစ်ပါး တို့ ဟာ ဒီလို နေရာမျိုး မှာ လက်ဝဲတော်ရံ ၊ လက်ယာတော်ရံ အဖြစ်ရရှိဘို့ အတွက် *တစ်သင်္ချေ နဲ့ ကမ္ဘာ တစ်သိန်း* ကြာအောင် ပါရမီ ဖြည့်ဆည်း ခဲ့ ရတယ်ဆိုတာကို မမေ့လျော့ ခဲ့ပါ..။ စာနာနားလည် ပေးခဲ့ပါတယ်..။ ငါရှိနေတဲ့အတွက် အားနာ နေရတယ်..။ မဝံ့မရဲ ဖြစ်ရရှာ တယ် ….။
အဲဒီအဂ္ဂသာဝက မထေရ် နှစ်ပါး ချမ်းသာစွာ နေရဘို့ *ငါ တခြားနေရာ ကို သွားမယ် * လို့ ဆုံးဖြတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်..။
မေတ္တာ နဲ့ ယှဉ် တဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့ နှလုံးသားတစ်ခု ရဲ့ အင်မတန် မှ လှပတဲ့ ငဲ့ကွက်မှု တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
အဝေး ဆုံးကို သွားမယ် ဆိုတဲ့ ထို နေရာ မှာ လေး ကို ဖတ်ရှုပြီး ရင်ထဲ မှာ နင့်နင့်သည်းသည်း နာကျင်ခံစားရပါတယ်..။ဘုရားရှင် နဲ့ အတူ နေထိုင်ရတဲ့ ၊ သီတင်သုံး ရတဲ့ ကာလ ဆိုတာ ၁ နှစ်တာ လောက်သာ ရှိခဲ့ရ ရှာ တာပါ..။
ကျွန်မ ငယ်ငယ် က ကြိုက်နှစ်သက်ဘူး တဲ့ စန္ဒယားချစ်ဆွေ ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ ဖြစ်ရစေ့မယ် သီချင်းထဲက *အဆင့်အတန်းမြင့်ဘို့သာ ပဲ..မောင်ရွယ် တယ်..ပို၍ဝေးသော နေရာသို့ ရှောင်ဖယ် မယ် * စာသားလေးကို ညည်းမိတိုင်း မေတ္တာဖြင့် ဆွေးမြေ့ သွားသော နှလုံးသားကို ခံစားတတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
လောကီ ထဲ မှာတောင် မေတ္တာ နှင့် ယှဉ် တဲ့အခါတိုင်း နင့်နဲ သိမ်မွေ့ သွား ရသလို..သိက္ခာ သုံးပါးရေပြင်ကျယ် မှာ ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်လာ တဲ့ ဗြဟ္မစိုရ်လေပြေ လေညှင်းဆိုတော့ အေးစိမ့် ငြိမ်းချမ်း ရတာ အမှန်ပါ။
အဂ္ဂသာဝက မဟုတ် ခဲ့သော်လည်း ဘုန်းကံ အင်မတန် ကြီးမားလှ တဲ့ မဟာ သာဝကကြီး တစ်ပါး ဖြစ်တော်မူတာမို့ ချဉ်းကပ်ပူဇော် သူများ များပြားလှပါတယ်..။
ဘုန်းကြီး ၊ ကျော်ကြား ၊ လာဘ်လာဘ များ ဆိုတာ လောကီအဆိပ်အတောက်လို့ အရှင်မြတ်က မြင်တော်မူပါတယ်..။
အဝေးသို့ သွားမယ် လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ အရှင်ကောဏ္ဍည ဟာ ရှင်တော်ဘုရားထံ ခွင့်ပန်တော်မူကာ ဟိမဝန္တာ တောအုပ်အတွင်း ၊ ဆဒ္ဒန်အိုင်အနီး မှာ ရှိတဲ့ မဏ္ဍာကိနီ ရေကန် ဆိပ်ကမ်း အနီး ရေကန်ဆိပ်ကမ်းကို ကြွလှမ်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီ ဆဒ္ဒန်အိုင် မှာ ရှေးအခါတုံးက ပစ္စေက ဗုဒ္ဓါ အရှင်မြတ် တွေကို ပြုစုလုပ်ကျွေး မှုအလေ့အကျင့်ရပြီးသား သက်တမ်းရှည် ဆင်လိမ္မာ ရှစ်ထောင် တို့ ရဲ့ အလှည့်ကျ လုပ်ကျွေးမှုကို ခံယူပြီး ၁၂- နှစ်တာ ကာလ ပတ်လုံး ဖလသမာပတ်ဝင်စားကာ ချမ်းသာစွာ သီတင်းသုံး နေတော်မူခဲ့ပါတယ်..။
အာယုသင်္ခါရ ကုန် ဆုံး လို့ ပရိနိဗ္ဗာန် စံတော်မူခါ နီး မှာ ရှင်တော်ဘုရား ထံ အဖူးမျှော် ရောက်ခဲ့ တာ ဟာ နောက်ဆုံး နှုတ်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်..။
ပါရမီးတော်ခရီး အပြီးသတ် ခဲ့ တဲ့ နေရာ ကတော့ ၁၂- နှစ်တာ ကာလ ပတ်လုံး လုပ်ကျွေးပြုစုတော်မူခဲ့တဲ့ ဆင်တွေ နားက ဆဒ္ဒန် အိုင်အနီးက ကျောင်းသင်္ခန်းလေးမှာ တစ်ပါး ထဲ ခန္ဓာဝန် ချတော်မူခဲ့တာ ကျွန်မ မှာ ဖတ်ရှုရင်း ဆို့နစ်ကြေကွဲ ရပြန်ပါတယ်..။
တောကြီး မြက်မည်း ထဲ မှာ ဖြစ်တာ မို့ လူတစ်ဦး မှမရှိ ၊ ဆင်ပေါင်းရှစ်ထောင် ရယ် နတ်၊ သိကြား ၊ ဗြဟ္မာ ပရိသတ် တွေ ကြီးကျယ် ခမ်းနားစွာ ပူဇော် ကြ တဲ့ ထူးကဲတဲ့ သာဓုကိဠန ပူဇာ ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်..။
နောက်တော့မှ ရဟန်းတော် ၅၀၀ ကောင်းကင်ခရီး နဲ့ ကြွရောက်ပြီး တရားတော်များ ရွတ်ဖတ် ပူဇော်ကြ ပါတယ်..။
ဒီပူဇော်ပွဲ မှာ အရှင်အနုရုဒ္ဓါ မထေရ်မြတ် တရားဟောကြားခဲ့တဲ့အတွက် နတ်ဗြဟ္မာ များ ကျွတ်တန်း ဝင်ကြပါတယ်..။
ကြွင်းကျန်ရစ်တဲ့ ဓာတ်တော်တွေကို ရဟန်းတော်တွေ ဟာ ရေစစ်အပြည့် နဲ့ ယူဆောင်လာပြီး ဝေဠုဝန် ကျောင်းတော် မုခ်ဦး မှာ အသင့် စောင့်ကြိုနေတဲ့ ဘုရားရှင်ထံ ပေးအပ် ကြပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ဟာ ဓာတ်တော်အပြည့်ပါတဲ့ ရေစစ်ကို လက်နဲ့ ကိုင်ပြီး သံ ဝေဂ တရားဟောကြားတော် မူခဲ့ ပြီး မဟာ ပထဝီမြေကြီး ကိုလက်ဆန့် တန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်..။အဲဒီခဏ မှာ ပဲ မြေကြီး ထဲ မှ ငွေခရု သဏ္ဍန် စေတီ ကြီး တစ်ဆူ ပေါ် ထွက် တော်မူလာ ခဲ့ပါတယ်။
ဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင် ထို စေတီကြီး ထဲ မှာ ဓာတ်တော်များကို ထည့်သွင် ဌာပနာ တော်မူ ပေးလိုက်ခဲ့ပါတယ်..။
ဘုရားရှင် ရဲ့ မဟာ သာဝက တွေ ထဲ မှာ ဝါ အကြီး ဆုံး ဆိုတဲ့ * ရတ္တညူ ဧတဒဂ် ဘွဲ့ ထူး* ကို ဆွတ်ခူးတော် မူခဲ့ တဲ့ အရှင် ကောဏ္ဍည ရဲ့ ပါရမီတော် ခရီး ကထိုကဲ့သို့ ပြီးစီးအောင်မြင်ခဲ့ရပါတယ်..။
သူတစ်ပါး ကို ထောက်ထားညှာတာတတ်တဲ့ ၊ လောကုတ္တရာ တရား ကို မြတ်နိုးခုံမင်တတ်တဲ့ ၊ သူတထူးရဲ့ ကျေးဇူးကို ပေးဆပ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားရှိတော်မူခဲ့ တဲ့ အရှင်မြတ် ဟာ အနတ္တ လက္ခဏ သုတ္တန် နဲ့ တရားထူးရတော်မူခဲ့ သူမို့ မိမိ အတ္တ ကို စွန့် လွှတ်တဲ့နေရာမှာ ရဲဝံ့ထူးချွန် ခဲ့တာပါပဲ..။
လကို ကြယ် ရံ သလို တင်တယ် စွာခြံရံ နေတဲ့ သံဃာ ပရိသတ် အလယ် မှာ မိမိ ရှိမနေအောင် စီမံ ခြင်းဖြင့် အဂ္ဂသာဝက နှစ်ပါး ရဲ့ လွတ်လတ်ချမ်းသာစွာ သီတင်းသုံး နေထိုင်မှုကို ဖန်တီးပေး သွားခဲ့ပါတယ်..။
နေရာ တစ်ခုကို လု နေကြတဲ့ ဒီခေတ် ထဲ မှာ မိမိ ပါဝင်ချင်တိုင်း ကျွန်မ မှာ အရှင်ကောဏ္ဍည ကို အမြဲသတိရ မိအောင် ဒီစာလေးကို ရေးမိပါတယ်..။
တော ထဲ မှာ ပဲ တရားအားထုတ် ..တောထဲ မှာ ပဲ ဘဝ ဆုံး ခဲ့တဲ့ အရှင်မြတ် သို့ ဆို့ ဆို့ နစ်နစ် ….နာကျင်သော နှလုံးသား ဖြင့် ပူဇော် ရင်း..တိုးတိုးလေးရေရွတ် လျှောက်ထားမိပါတယ်….
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:39 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ကိုယ် ပိုင်အလုပ်တွေ ကိုယ် စီ လုပ်နေပေမဲ့ အချိန်ပိုလေး တွေ ရလာတိုင်း ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ကို စိတ်ပါလက်ပါ လုပ်ဆောင်တတ်တဲ့ မောင်နှမလေး(ကိုအုတ်+ မစု) နှစ်ယောက် နှင့် သူတို့ရဲ့ ပရဟိတ သူငယ်ချင်းများ ကို ဖြင့် ကျွန်မ မှာ တကယ်ပဲကျေးဇူးတင်မိပါတယ်..။
သူတို့က ရေများရာ မိုးရွာ သော သူများမဟုတ်။ အမှန်တကယ် လိုအပ်သော နေရာ များ အတွက် အမှန်တကယ် ပေးဆပ်လိုတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားမြင့်မား ကြသူများလည်း ဖြစ်ပါတယ်..။
ဟိုတလောကတော့ သူတို့ မောင်နှမ ရဲ့ ပရဟိတ ကွန်ယက်ထဲ မှ သမီးလေးတစ်ဦး ဖြစ်သူ မခင်မြတ် ရဲ့ စိတ်ကူးလေး နဲ့ စပယ် ပန်းရောင်းတဲ့ကလေးများကို စာသွားသင်ပေးကြ တဲ့ အစီအစဉ်လေး ကို သိလိုက်ရတော့ ကျွန်မ မှာ မျက်ရည် ရစ်ဝဲလာသည် ထိ ပီတိဖြစ်ရပါတယ်…။
Curriculum Development တို့ Classroom Climate တို့ Teaching Aid တို့ အကြောင်း ပြောလေ့ရှိတဲ့ ကျွန်မ မှာ မျက်လုံးအစုံ ပြူးကျယ် ၍ သူတို့ရဲ့ မီးပွိုင့် နားက ပလက်ဖောင်း စာသင်ဝိုင်းကို ဦးညွှတ်အလေးပြုရပါတော့တယ်..။ တော်ပေစွ ကလေးတွေပါတကား။
သူများတွေ ကျောင်းတက်ချိန်မှာ မတက်ရ…။ ပညာရှာချိန်မှာ ဥစ္စာ ရှာနေရ အောင် ဘယ်လို အကြောင်းများ လုပ်ခဲ့ပါလိမ့်ကလေးတို့ရယ်..။
အရွယ် နဲ့ မမျှ မိမိဝမ်းစာ..(မိသားစု အတွက်လည်းပါနိုင်သေး)… မိမိဖာသာ ရှာရရှာသော.. ကလေး တွေ ရဲ့ ဘဝကို ထပ်တူစာနာနားလည် ပေး တာကိုလည်း ချီးကျူးရပါတယ်..။
ဟုတ်ပါတယ်လေ..ညဘက်ဆို ရင်လည်း သူများတွေ မိဘ ရင်ခွင်မှာ ထိုင်ကာ ရုပ်မြင်သံကြား ထိုင်ကြည့်နေကြ တဲ့ ကလေးများ လို ကြည့်ချင်ကြရှာ မှာပါ..။မိုးရွာ ထဲလည်းဘယ်ထွက်ချင်ပါ့မလဲ..။
ကံအကျိုးပေးမလှရှာသူ ပန်းသည်လေး များဘဝကို စာနာ နားလည် တတ်တယ် ထိထိ ရောက်ရောက်ကူညီနိုင်အောင် ကြိုးစားအားထုတ်တာ ကို ကျွန်မ အလွန်လေးစားချီးကျူး မိပါတယ်…။
ပရဟိတမောင်မယ် လေးတွေကမီးပွိုင့် မှာ ပန်းရောင်းတဲ့ကလေးတွေ ဆီ သွားပါတယ်..။ ပြီးတော့ ၂ဖွဲ့ ခွဲ ပြီး တစ်ဖွဲ့ က သူတို့ကိုယ် စား စပယ် ပန်းရောင်းပေးကြပါတယ်..။ကျန်တစ်ဖွဲ့က ကလေးတွေကို ထိုင်ခိုင်းပြီး စာသင်ပေးတဲ့လူက သင်ပေး၊ ပုံပြင်ပြောပြတဲ့ လူ ကပြောပြ ကြတာပါ..။
တချို့ ကလည်း ကလေးတွေ ရဲ့ အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ စိတ်ကို ဖျက်ဆီးရာ ရောက်တယ် လို့ မြင်ကြပါတယ်..။
ဘဝ တွေ ဆိုတာ ကလည်း အကြင်နာ ရရှိဘူးတဲ့ သူ မှသာ ကြင်နာ တတ်တာပါ…။
မေတ္တာ ရဘူး မှ သာ မေတ္တာ တရားကို ထိတွေ့ခွင့် ရပြီး ပြန်ပေးနိုင်ကြတာမျိုးပါ။
စေတနာ တရားကို သူတပါးထံ မှ ရရှိခံစားဘူး မှသာ စေတနာ ကို ပြန်ပေးချင်စိတ် ပေါ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်..။
တချို့ ကားမောင်းလာတဲ့ စေတနာရှင်တွေကလည်း ပရဟိတ ကလေးတွေက တဆင့် ငွေတွေ လှူဒါန်းသွားတတ်ပါသေးတယ်…။
မီးမီး ကတော့ ကလေးတွေ ကိုတကယ် စေတနာ ထားရင် ငွေမပေးပဲ ကစားစရာ၊ ဖတ်စရာ စာအုပ်တွေပေးခဲ့ဘို့ ပြော ပါတယ်..။
သူတို့မလာတာကြာတော့ ဟိုတနေ့ က ဖုန်းဆက်ပါတယ်..။ မမတို့ ကိုကို တို့ ဘယ်တော့လာကြမှာလဲ တဲ့..။
ပရဟိတ မမ ၊ ကိုကို များ ရဲ့ အကြင်နာ စက်ဝန်း ကျယ် ပြန့်စွာ ဖြန့်ကျက် နိုင်ပါစေသား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:30 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် သမီးလေးမစုမြတ်, သားကြီးကိုဥဂ္ဂါ
မကောင်းမှုပြုလေ့ရှိသူ (ပါပကာရီပုဂ္ဂိုလ်)သို့ ကရုဏာဗြဟ္မဝိဟာရ
( ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင် ၏ ဝိသုဒ္ဓိမဂ် (ဒုတိယဆင့်) စာမျက်နှာ ၂၅ ကို ကိုးကားရေးသားပူဇော်အပ်ပါသည်။)
အခုတလော…ကြည်လင်ချမ်းမြေ့သော စိတ်နှလုံးကို ထိခိုက်ညစ်ညူးစေတဲ့ သတင်းတွေဟာ မကြည့်ချင် မြင်လျက်သား၊ မကြားချင် နားဆင်လျက်သားဆိုသလို ဝင်ရောက် လာနေပါတယ်..။
ထိုအခါတိုင်း လေ့ကျင့်ထုံမွေ့ မှုမရင့်ကျက်သေးသော သတိက တိမ်းပါးချွတ်ချော် ပြီး… မဖြစ်သင့်ဘူးရယ်လို့ အပူဓာတ်တွေ စိမ့်ထွက်ကာ အကုသိုလ် လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်မိနေတာ…..။
ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးပတ်လောက်က ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်လှတင်(ဓမ္မဗျူဟာ) ဝိသုဒ္ဓိမဂ် သင်တန်း ဒုတိယဆင့် မှတ်စုကို ပြန်လည် လေ့လာ ကျက်မှတ်ရင်း လက်တွေ့ကျင့်စဉ်လေးတစ်ခု ကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်..။
ကျွန်မ ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံး ရင်း ထွက်ပေါက် တစ်ခု ရသလို မို့ ဓမ္မမိတ်ဆွေ များကိုလည်း ပြန်လည် မျှဝေပါရစေ..။
သူ့ရဲ့ လုပ်ရပ် တွေကြောင့်မေတ္တာပွားလို့လည်းမရ ၊ ပို့သလို့လည်းမရတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ ကရုဏာ ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ ပွားလို့ရတယ်ဆိုတာ ကို တွေ့ရပါတယ်..။
ပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာသူ ဖြစ်သော်လည်း မကောင်းမှုတွေ ပြုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကို ပါပကာရီလို့ခေါ်ပါတယ်..။ ထို ပါပကာရီပုဂ္ဂိုလ် အကြောင်းကို တွေ့မြင် ကြားသိရတဲ့အခါ ကျွန်မတို့ အဘို့ စိတ်မချမ်းမြေ့ ခြင်း ၊ အပြစ်တင်ရှုံ့ချလိုခြင်း၊ ချေမှုန်းပစ်ချင်စိတ်တွေ အလိပ်လိုက်တက်လာ ပြီး ကိုယ့်သဏ္ဍန် မှာ အကုသိုလ် ဖြစ်ရတော့လည်း ကိုယ့်မှာ ရှုံးရတတ်ပါတယ်..။
ကရုဏာ ဗြဟ္မာ့ဝိဟာရ ပွားလိုက်တော့ ကုသိုလ်ဖြစ်တာ တွေ့ ရပါတယ်..။ ဥပမာ ဆိုပါစို့..။
ခိုးထုပ်ခိုးထည် နှင့် တကွဖမ်းမိလာတဲ့ ခိုးသူ တစ်ယောက်ကို မင်းအမိန်ဖြင့်သတ်မိန့်ပေးထားတဲ့အတွက် မင်းချင်းယောကျာင်္းတွေက လက်ပြန်ကြိုး စတာတွေ နဲ့ ချည် နှောင်ပြီး သူသတ်ကုန်းကို ခေါ်ဆောင်လာပါတယ်..။
လမ်းလေးခွ ဆုံ အရပ်မှာ လည်း အချက်ပေါင်းတစ်ရာမက ရိုက်နှက်ပြီး ခေါ်ဆောင်လာ တဲ့အတွက် ထို ခိုးသူကို လူအများက သနားကရုဏာ ဖြစ်ပြီး ခဲဖွယ် ဘောဇဉ် ၊ပန်းနံ့သာ တို့ကို ပေးကမ်းကြပါတယ်..။
ထို ခိုးသူ သည် ခဲဖွယ် ဘောဇဉ် တွေ စားသောက်လျက် သုံးဆောင်ဖွယ် စည်းစိမ် တွေ နဲ့ ပြည့်စုံ နေတဲ့ ခိုးသူကို ......
( ဤ သူသည် ချမ်းသာပေစွ ၊ များစွာသော သုံးဆောင်ဖွယ် စည်းစိမ် နဲ့ ပြည့်စုံပေစွ ) ရယ်လို့ ဘယ်သူက မှ မထင်မှတ်ကြပါဘူး ။
အော် ဤသူသည် မကြာခင် မှာ သေရရှာပေတော့မယ်။သူရဲ့ခြေလှမ်းတိုင်းသည် သေခြင်းတရားနဲ့ နီးကပ် နီးကပ်သွားလေတော့တယ် လို့ ကရုဏာ သက်ကြရှာပါတယ်.။
ဒီလိုပဲ ကရုဏာဗြဟ္မဝိဟာရ ပွားများမဲ့သူဟာ
အနိုင်ရသလို ဖြစ်နေတဲ့ ..ပါပကာရီ ပုဂ္ဂိုလ် တွေကို တွေ့ တဲ့အခါ…သူသတ်ကုန်းကိုခေါ်ဆောင်ခြင်းခံနေရတဲ့ ခိုးသူ လို ပဲ မှတ်ယူရပါမယ်..။
ပြီးတော့ ----( ထိုသူသည် ချမ်းသာနေသော်လည်း အခုအခါ ချမ်းသာလျက် …ကောင်းမွန်စွာ ဝတ်ဆင်လျက် …သုံးဆောင်ဖွယ် စည်းစိမ် ဥစ္စာတွေ ပြည့်စုံနေလျက် …. ထိုထို တို့ကို သုံးဆောင်ခံစားနေပေသော်လည်း ဒွါရ သုံးပါး တို့တွင် တစ်ခုမျှပင် ပြုထားသော ကောင်းမှု ကံမရှိခြင်းကြောင့် မကြာမတင်လေးမှာပင် အပါယ် ဘုံ မှာ များစွာသော ဆင်းရဲကို ခံစားရရှာလေတော့မယ် ) လို့ ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းရပါမယ်..။
ထိုသို့ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းလိုက် တဲ့အခါ မှာ ကျွန်မတို့ ကရုဏာဗြဟ္မဝိဟာရ ပွားများပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်..။
ကျွန်မတို့ ပတ်ဝန်းကျင် မှာ (ပါပကာရီ) တွေကလည်း တနေ့တခြား များးလာတာဆိုတော့လည်း ဒီလို ဆင်ခြင် နှလုံးသွင်းမှု ရှိမှ ပဲ ကိုယ်က အရှုံးမဖြစ် ရမှာပါ..။
ထိုပုဂ္ဂိုလ နဲ့ သူ့ရဲ့သတင်းတွေတွေ့တိုင်းဖတ်ရလေတိုင်း ထိုသို့ အမြတ်ယူကြရအောင်ပါ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 10:21 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ပါရမီ(၁၀)ပါး သို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း, မင်္ဂလာဗျူဟာအသင်း
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ သစ္စာ ဥာဏ်အလင်း တွေ ဟာသစ်ပင်တွေ နဲ့ ဆက်စပ်လို့နေခဲ့တာ အထင်အရှားပါပဲ ရယ်လို့ အမှတ်ထင်ထင် မှတ်မိ နေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဗောဓိ ဆိုတဲ့ပါဠိ သည် သိမြင်တော်မူခြင်း၊သိမြင်တော်မူရာလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဘုရားရှင်အဆူဆူတို့ရဲ့ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကို ပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်တော်မူရာ သစ်ပင်ထူး ၊သစ်ပင်မြတ်တွေကို ဗောဓိ ပင်လို့ သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုကြတာ ပေါ့နော် ။
ဝေဿဘူ ၊ ကကုသန်၊ ကောဏာဂုံ၊ ကဿပ ဘုရားရှင် တို့ပွင့်တော်မူရာ သစ်ပင်တွေက တော့ အင်ကြင်းပင် ၊ ကုက္ကိုပင်၊ ရေသဖန်းပင်၊ ပညောင်ပင် တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ ကျွန်မတို့ရဲ့ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင် သစ္စာလေးပါး၊မြတ်တရားကိုသိမြင်တော်မူရာ သစ်ပင်ကတော့ ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ၊ (ညောင်နီပင် ဖြစ်ပါတယ်)။
တပေါင်းလကတည်း ကစပြီး ကျွန်မ က ဗောဓိညောင်ပင် တော်တော် များများ ကို အာရုံစိုက်နေဖြစ်ခဲ့တာ မို့ ရွက်သစ်လောင်းစ အချိန်လေးမှာ ညောင်ရွက်နုသစ်လေးတွေ ဟာ ပန်းနုရောင် ပြေပြေလွင်လွင် နဲ့ တွဲရရွဲကျဆင်းနေပြီး အရွက်မရင့်တရင့်လေးတွေ က စိမ်းဖန့်ဖန့်ဖြန့်ကျက်နေတာကို ကျွန်မ ကြည့်မဝခဲ့ပါ။
အခုတော့ ကဆုန်လပြည့် ရောက်ခါ နီးပြီမို့ ရွက်သစ်တွေ လည်းစိမ်းစို အုပ်ဆိုင်းလို့ နွေအပူကို ရင်ဆိုင်ကြရှာပါတယ်။
ဗောဓိပင် ဆိုတာဖွားဘက်တော်လည်းဖြစ်သလို ပရိဘောဂ စေတီ ထိုက်တယ်ဆိုတာကို ဘုရားရှင်သက်တော်ထင်ရှား ရှိကတည်း အရှင်အာနန္ဒာကို မိန့်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ပူဇော်ထိုက်ကြောင်း တေရသကနိပါတ်တော်လာ ၊ကာလိင်္ဂ ဗောဓိဇာတ် မှာပြဆိုထားပြီး ၊ခုဒ္ဒကပါဠိ အဋ္ဌကထာ နိမိကဏ္ဍသုတ်အဖွင့်၌ လည်း ပရိဘောဂစေတီ မည်ကြောင်းဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။
ဗောဓိပင်သည် ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဖွားဘက်တော် များတွင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုံးက မင်္ဂလာဗျူဟာယဉ်ကျေးမှု သင် တန်းကဆရာကြီးဦးမြသောင်း သင်ကြားပေးခဲ့လိုက်ဘူးတဲ့ကဗျာ လေး ကို ယနေ့တိုင်မှတ်မိနေခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဗျာလေး အရတော့
(ကာဠု၊ယသော်၊ညီတော် ၊ဆန္န၊ကဏ္ဍက နှင့် သောန၊ ဗုဒ္ဓဟေ) လို့ ဖွားဘက်တော်(၇)ဦးကိုကျက်မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
၄။ ဆန္န အမတ်
၇။ ညောင်ဗုဒ္ဓဟေ ဗောဓိပင် တို့သည် ဖွားဘက်တော်များပါ။
ကျွန်မတို့အားလုံးရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရား သက်တော်ထင်ရှားရှိစဉ်မှာ---အနာထပိဏ်သူဌေးကြီးသည် အရှင်အာနန္ဒာနှင့် တွေ့ဆုံကာ လျှောက်ထား ခဲ့ဘူးပါတယ်။ *(အရှင်အာနန္ဒာ ကိုယ်တော်ကြီးဘုရား..။ရပ်ဝေ:ရပ်နီးမှ ရဟန်းရှင်လူ၊ပုဂ္ဂိုလ်တို့ သည် ဘုရားရှင်ကို ဖူးမျှော်ဘို့လာရောက်ကြတဲ့အခါ။ဘုရားရှင်ဒေသစာရီကြွရောက်တာနဲ့ ကြုံလို့လွဲသွားတဲ့ အခါ စိတ် နှလုံးတွေ ညှိုးနွမ်းပြီး ပြန်သွားကြရပါတယ် ဘုရား။ သည့်အတွက် ဘုရားရှင် ကိုယ်စားတော်ပြုပြီး ဖူးမျှော်နိုင်မဲ့ အရာ တစ်ခုခု စီမံပေးဘို့ ဘုရားရှင်အားလျှောက်ထားပေးတော်မူပါဘုရား။)*
အရှင်အာနန္ဒာကဘုရားရှင်ထံ ပြန်လည် လျှောက်ထားတဲ့ အခါမှာ------*ချစ်သားအာနန္ဒာ၊ငါဘုရားရှင်မရှိ တဲ့ အခါမျိုးမှာ ငါဘုရားရှင်ကဲ့သို့ ကိုးကွယ်ပူဇော်ထိုက်တဲ့ စေတီတွေရှိပါတယ်..။
၁။ငါဘုရားရဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆံ၊ မွေးညှင်း၊သွား၊ ညှပ်ရိုး၊ အစရှိတဲ့ သာရီရိကစေတီ။
၂။ငါဘုရားရှင်ရဲ့ အသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့၊ သပိတ်၊သင်္ကန်း၊ ကျောင်းအစရှိတဲ့ ပရိဘောဂစေတီ။
၃။ငါဘုရားရှင်ကို ရည်မှတ်ထုလုပ်ကိုးကွယ်အပ်တဲ့ ဥဒ္ဒိဿစေတီဆိုပြီး စေတီအပြား။သုံးပါးရှိကြလေရဲ့။
အဲဒီထဲတွေမှာ--ဘုရားရှင်တွေရဲ့ သစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်ရာ မဟာဗောဓိပင်ဆိုတာ ဘုရားရှင် တို့သက်တော် ထင်ရှား ရှိစဉ်မှာပင် စေတီမည်ပါတော့တယ်ချစ်သား--- လို့မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ပါတယ်။*
သည်သို့ဘုရားရှင် မိန့်မှာစကားကို မှတ်သားပြီး အရှင်အာနန္ဒာလည်း မဟာဗောဓိပင်မှ မျိုးစေ့ကို သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတဝန်ကျောင်းတော် မုခ်ဦးတံခါးဝ ဝယ်စိုက်ပျိုးခဲ့ပါလေတော့ သည်။ဗုဒ္ဓဂယာ မြေမြတ်မဟာမှ ညောင်မျိုးစေ့ကိုတော့ အရှင်မဟာမောဂ္ဂလန် မထေရ်မြတ်ကြီးက တန်ခိုးဖြင့်ယူဆောင်ပေးတယ်လို့တော့မှတ်သားဘူးပါသည်။ လူအများသည် ဘုရားရှင် မရှိ ခိုက်လာ ရောက်ကြလျင် ဗောဓိပင်ကို ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ပူဇော်ဖူးမျှော်ကြပါတယ်။ အဆိုပါဗောဓိပင်သည်ကား အာနန္ဒာ ဗောဓိပင် အဖြစ် မှတ်သားခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်။
ညောင်ရေသွန်းကြတယ် ဆိုတာကတော့ မြန်မာ မင်းများလက်ထက်က စတင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ပူပြင်းခြောက်သွေ့ တဲ့ နွေကိုဖြတ်သန်း ရတဲ့ သစ်ပင် ဆိုတာ ရေစင်လေးတွေ သောက်သုံးရမှ လန်းဆန်းရမှာပါ။ မုတ်သုန်မိုး ကလည်း လုံလောက် အောင် မရွာသွန်းနိုင် သေးတဲ့အချိန်မို့….ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တို့ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ဘုရားရှင်ကိုယ်စား ညောင်ဗုဒ္ဓဟေဗောဓိပင်ကို လန်းဆန်းစေတဲ့ရေစင်လှူဒါန်းမှုကို ရှေးလူကြီးများအမျှော်အမြင်ကြီးစွာ စီမံခဲ့တာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၅၃၆ တွင် နရပတိစည်သူမင်းလက်ထက်တွင်ပေါင်လောင်ရှင်ဟုအမည်တွင်သည့် အရှင် ကဿပ မထေရ်သည် သီဟိုဠ်(သီရိလင်္ကာ) ကျွန်းသို့သွားရောက်ပြီး ဗောဓိညောင်စေ့များကိုမြန်မာနိုင်ငံသို့ ယူဆောင်လျက် စိုက် ပျိုးခဲ့ကြပါတယ်။
ညောင်ရေသွန်းသည့်ဓလေ့ကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၆၈၄ ခုနှစ် ပင်းယ တွင် မင်းပြု သော ဥဇနာမင်းကြီးသည် ပုဂံမှ နရပတိစည်သူမင်းထံမှ ဗောဓိ ညောင်စေ့ များကိုတောင်း ခံလျက် ကိုယ်တော် တိုင်စိုက်ပျိုးခဲ့ ကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်။ ဥဇနာမင်းသည် စိုက်ပျိုးပြီး ကဆုန် ညောင်ရေ သွန်းပွဲတော်ကို ဦး ဆောင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
နွေအပူလေး ကိုရေအလှူပေး ကြတဲ့ မြန်မာ့ ရိုးရာဓလေ့ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသေးတယ်။
မြန်မာ့ ရိုးရာပွဲတော်များတွင် ရေကြည်ရေသန့်များကိုအလဟဿ ဖြုန်းတီးပစ်သည့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို အားမပေးလိုလှပါ။
မေလရဲ့ နွေကာ လများကို အပူဒဏ်ခံဖြတ်သန်းခဲ့ရသော မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ဗောဓိပင် (ကျွန်မတို့ဂေါတမ ဘုရားရှင်၏ ဗောဓိပင်ကတော့ ညောင်ပင်)ကို ရှင်သန်စိမ်းလန်းစေလိုသော၊တနည်းအားဖြင့် သာသနာ စည်ပင်၊ တိုးတက် ရှင်သန် စေလို သော ဆန္ဒမွန်များ ပါဝင်နေသည့် ဗုဒ္ဓ မွေးနေ့ ပူဇော် ပွဲကိုကား ၊သဒ္ဓါခညောင်း၊ စေတနာ ရေစင် များ သွန်း လောင်းလိုလှပါသည်။
သစ်ပင်တွေကိုချစ်ပြီး သစ်ပင်တွေပြောတဲ့ဘာသာစကားကို နားလည်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ဘုရားရှင်တစ်ဆူ တိုင်းရဲ့သမိုင်းတိုင်းမှာ သစ်ပင်တစ်ပင်စီ ပါဝင် နေတာဟာမြတ်နိုး တန်ဘိုးထား ဘွယ်အမှတ်တရ နေ့ရက်ဖြစ်လို့ နေပါတယ်..။..
ဗောဓိပင်ပေါက်တဲ့နေ့မှာ ဂေါတမ ဘုရားရှင်ရဲ့မွေးနေ့ မှာ ဗောဓိပင်ကိုရေစင်သွန်းလောင်းရင်း ဘုရားရှင်ရဲ့သစ္စာ စကားတွေ နားဆင်ချင်မိပါသေးတယ်..။ နောင်ဘုရားရှင်ရဲ့ ဗောဓိပင် ကံ့ကော်ပင်တွေကိုလည်း စိုက်ပျိုး လိုက်ချင်ပါသေးတယ်..ကမ္ဘာ မြေ အနှံ့ပေါ့နော်...။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ချမ်းမြေ့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က ဘုရားရှင် ရဲ့ ဂုဏ်ကျေးဇူး ကိုသိရင် တုံ့ဆပ်ပူဇော် ရပါမယ်တဲ့။ အကောင်းဆုံး ပူဇော် နည်းကတော့ လောကုတ္တရာ တရားကိုးပါး အားလျော်သော ကျင့်ဝတ် ပဋိပတ် အကျင့်မြတ်နဲ့ ပူဇော် ဘို့ကို ကျွန်မ သေချာ မှတ်သားလိုက်မိပါတယ်။ .
ဗုဒ္ဓသာသနာ သက်တမ်း သည် အဓွန့်ရှည်စွာ တည်တံ့ခိုင်မြဲ ပါစေသား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:53 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ယနေ့ဟာ…ကျွန်မတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအားလုံးရဲ့နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ် တဲ့ ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
စိုက်ပျိုးရေး နှင့် ဘွဲ့ ယူခဲ့သောကျွန်မ ကဗောဓိပင် ပေါက်တဲ့နေ့ကို အမှတ်တရ ပိုလို့ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ကဆုန်လပြည့် နေ့ရဲ့ ထူးခြားချက်တွေ က ကြီးမြတ် လှစွာ ဦးခိုက်ဖွယ်ရာ ပြည့်နှက်လို့နေပါတယ်..။
ကဆုန်လပြည့်ဗုဒ္ဓနေ့ ဆိုတာကတော့ ခပ်သိမ်းသော ဘုရားရှင်တို့သည် သစ္စာလေးပါးကို သိကြ တဲ့ နေ့ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ခပ်သိမ်းသော ဘုရားရှင် အားလုံးတို့သည် သစ္စာလေးပါး၊ မြတ်တရားကို ၊ ဆရာမကူ ၊သယမ္ဘူ ဥာဏ် မြတ်ဖြင့် ကိုယ်တော် တိုင်ထိုးထွင်း သိတာ ဒီ ကဆုန်လပြည့်နေ့ မှာပါ..။
ပွင့် တော် မူကြ တဲ့ ဘုရားအဆူဆူ သည် သည်နေ့ အ ရောက်မှာ သစ္စာ တရားကို သိမြင် ကြတယ် ဆိုတော့ သစ္စာ ဥာဏ်ရောင် ထွန်းသစ်သော နေ့ ရယ်လို့ တန်ဘိုးထား မြတ်နိုးမိပါတယ်။
ဖွား၊ ပွင့်၊ ဟော၊ စံ၊ ဗျာဒိတ်ခံ ၊မှတ်ရန်လမြတ်ကဆုန်။လို့လည်း မှတ်သားခဲ့ဘူးပါတယ် ။ဤသည်တို့မှာကား…
(၁) ဗျာဒိတ်ခံယူတော်မူသည့်နေ့ = လေး သင်္ချေကမ္ဘာတစ်သိန်း ၏ အစ ကဆုန်လပြည့်နေ့။
(၂) ကျေးဇူးတော်ရှင် ဂေါတမ မြတ်စွာဘုရားရှင်မွေးဖွားတော်မူသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၆၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (သောကြာနေ့)။ (ဘီစီ ၆၂၃)
(၃) ဘုရားအဖြစ်ရောက်ရှိ တော်မူသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)။ (ဘီစီ ၅၈၈)
(၄) ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းဟောကြားတော်မူသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၀၄)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်နေ့။ (ဘီစီ ၅၈၇)
(၅) ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင် တော်မူသည့်နေ့ = မဟာသက္ကရာဇ် (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်(အင်္ဂါနေ့)။(ဘီစီ ၅၄၃)
ဖွား၊ ပွင့်၊ ဟော၊ စံ၊ ဗျာဒိတ်ခံ စတဲ့ ထူးခြားချက်တွေအပြင် သစ္စာရနံ့ တွေ လွှမ်းခြုံ လျက် ကျန်ရှိနေသေးသော စကြဝဠာ အနှံ့ သို့ ရည်မှန်းလျက် ကျွန်မ သစ္စာအလင်း မှ ရိုးကျိုးစွာပူဇော် ဦးခိုက် လိုက်ပါတယ်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:49 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း( ခုပ္ပိပါသာ)
( ဆရာကြီးဦးရွှေအောင် ၏ လောကသားတို့ ၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်၊ စာ ၁၇၀ မှ အတွေးအခေါ် ၊စာသားတို့ကို ကိုးကားရေးသားပူဇော်ပါသည်။)
ပါရမီ (၁၀) ပါး တို့ တွင် နေက္ခမ္မပါရမီ က စောင့်ရှောက်မှသာပြုသမျှ ကုသိုလ်များသည် ၊ ပါရမီ ဖြစ်နိုင်ကြသည်ဟု ဥတ္တမ ပုရိသဒီပနီ ၌ ဆိုကြောင်း အဘိဓဇ မဟာ ရဋ္ဌဂုရု တောင်လေးလုံးဆရာတော်ကြီး က သူ၏ပါရမီ အလင်းပြကျမ်းမှာဖေါ်ပြထားခဲ့ပါတယ်။
နေက္ခမ္မ ဟူသည် တပ်မက်စရာများကို အာရုံမပြုပဲ လောက၏ အစီးအပွားအတွက် မိမိတာဝန်ကို မိမိကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ခြင်း ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်တဲ့ နေရာမှာလည်းလောက၊ ပြည်ရွာအကျိုးကို ပထမ ၊ မိမိရဲ့ အသိုက်အဝန်း အကျိုးကို ဒုတိယ ၊ မိမိအကျိုးကို နောက်ဆုံးထား၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း ပင်ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်အားဖြင့် နေက္ခမ္မ ၏ အဓိပ္မါယ် သည် အရာရာတိုင်းကို တပ်မက်သော လောဘ၏ ဆန့်ကျင်ဘက် အလောဘ ဖြစ် ၍ အရာရာတိုင်း ကို အနစ်နာ ခံ၍ စွန့်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။ အသက် ၊စည်းစိမ် နှင့်ရာထူးဂုဏ်သိမ်များ ကိုပါစွန့်လွှတ် နိုင်ပါတယ်။
ထိုသို့စွန့်လွှတ်ခြင်းသည် မိမိအတွက် မာနခံ၍ စွန့်လွှတ်ခြင်းမျိုးမဟုတ် ၊တစ်ခုတစ်ခု ကို မျှော်ကိုး၍ ၊ အတုံ့ အပြန်ရလို ၍ ၊ကျေးဇူးတင်ခံလို၍ စွန့်လွှတ်ခြင်း မျိုးမဟုတ် ၊ လောက အတွက်အကျိုးရှိစေလို၍ မြင့်မြတ်သော မေတ္တာ ၊စေတနာ ဖြင့် စွန့်လွှတ်ခြင်းမျိုးသာဖြစ် ပါတယ်..။
နေက္ခမ္မစိတ်ထားရှိသော သူမြတ်များသည် တပ်မက်ဖွယ်ရာ များအားလုံး ကိုလည်း မတပ်မက် ၊ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ များဖြင့် ခြောက်၍ လည်းမကြောက် ၊ တပ်မက်ဖွယ် အားလုံးတို့ကို နေက္ခမ္မပါရမီ ဖြင့် အနစ်နာ ခံ၍ လောကအတွက် စွန့်၏ ။ ထိုအခါ နိက္ခမ္မပါရမီသည် နိက္ခမ္မ သင်္ကပ္ပ မဂ္ဂင် အဖြစ် ထင်ရှားလာပါတယ်..။
နေက္ခမ္မ သဘောဖြင့် အများ ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အတွက် လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေ မှာ စိတ်ဝင်စားတာ..မွေ့လျော် ပျော်ပိုက်လာ တယ်..ဓမ္မရတိ ကိုတွေ့ အောင်ရှာ နိုင်တဲ့ သူတွေဟာ မာရ်နတ် ရဲ့ ဒုတိယ တပ်မ ကို လွန်မြောက် အောင်နိုင်ကြတဲ့သူတွေ ပါ..။
တတိယ တပ်မ ကို တွေ့ ဘို့ ရှိပါသေးတယ်..။ ကျွန်မ တို့ တော်တော် များများ ကျဆုံး ခဲ့ရတဲ့ တပ်မ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ဒီတပ်မ ရဲ့ အစွမ်း ဟာ မသေးလှပါဘူး.. ။ ကျွန်မ တို့ကိုယ် တိုင်လည်း ဒီတပ်မ ကိုမကျော် လွန်နိုင် သေးပါဘူး..။
တတိယ တပ်မ ကတော့ ငတ်မွတ်ခြင်း ဆိုတဲ့ *ခုပ္ပိပါသာ* ပဲဖြစ်ပါတယ်..။ အဲဒီအချိ်န် မှာ ကျွန်မ ဟာ ဘုရားရှင် ရဲ့ ဖြစ်စဉ် တွေကို မှန်းဆ ကြည်ညို ရပါတယ်..။
မွန်မြတ်တဲ့ အဟာရ ဘောဇဉ် ကို သုံးဆောင်ခဲ့တဲ့ သာကီဝင်မင်းသားတစ်ပါး ဟာ တောထဲ တောင် မှာ ကျလာ တဲ့ သစ်သီးလေးကို ပဲ ကောက်ယူစာသုံးခဲ့တာ…နောက်ဆုံးလုံးဝ မစားပဲ ကျင့်ကြံကြိုးကုတ် အား ထုတ် ခဲ့တဲ့ ဒုက္ကရ စရိယ ခြောက်နှစ်တာ ကာလ တွေဟာ ဘုရားဆုပန် ယောင်္ကျား မြတ် တို့ ရဲ့ ခိုင်ကျည် တဲ့ နေက္ခမ္မ သဘော တွေပါပဲ..ရယ် လို့ လေးမြတ်ကော်ရော် မိပါတယ်။
ဆွမ်းခံစား တဲ့အခါ မှာ လည်း ကြမ်းတမ်း တဲ့ အရသာတွေ ရောယှက်နေတဲ့ ဆွမ်း ဟာ နန်းတွင်း မှာနေစဉ် ကာလတွေ နဲ့ နှိုင်းစာရင် ဆီနဲ့ ရေ လို…။
ဒါတွေကို တွေး မိရင် *ရသ တဏှာ* စေစား သမျှ လျှာ အရာသာခံပြီး သွတ်သွင်းရင်း လိုအပ်တာထက် အလေးချိန်ပိုစီးနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကို အလွန် အင်မတန် ရှက် မိ..စက်ဆုပ်မိပါသေးတယ်..။ ဆင်ခြင်ဖွယ်ပါတကား။
ကျွန်မအတွက်...အများ အကျိုးကို ဆောင်ရွက်လို စိတ် နဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ ရာထူး၊ အခွင့်အလန်း တွေကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ ရ တဲ့ စိတ်ကလည်းတစ်ခါ ..တစ်ခါ ခနော်နီ ခနော်နဲ့ ဖြစ်ရပြန်ပါသေးတယ်..။
ပညာတွေ ပြည့်စုံမှုကြောင့် ပစ္စည်း ၊ဥစ္စာ ၊ စည်းစိမ် တွေ ပြည့်စုံ လာကြတဲ့ အပြင်* ဝင့်ဝါ လိုမှုရောဂါ * များ ပါဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေအချို့ နဲ့ ထိတွေ့ဆက်ဆံ ရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့ ..မခံချင်စိတ် နဲ့ မျက်ရည် များ ပင် ကျချင်ချင် ဖြစ်ရပါသေးတယ်..။
တကယ်တော့လည်း.. တန်ဘိုးထားတဲ့ အရာ မတူ ရင် လမ်းကြောင်းတွေ ဟာ မတူတတ်ကြပါဘူး..။
ဒါကို သတိ နဲ့ မထိန်းသိမ်းပဲ
ငါ ဆိုတဲ့ မာန တစ်ခွဲသား နဲ့ ယှဉ်ပြိုင် အစွမ်း ပြချင်စိတ် တွေ ပေါ်ပြီး မူလ လမ်းကြောင်း မှ သွေဖယ် ပြေးထွက် ချင်တာ ဟာ တကယ် တော့ မာရ်နတ် ရဲ့ တတိယ စစ်တပ်မှာ မရှု မလှ ကျဆုံး ရတာပါပဲ..။
အဲဒီအခါ အများအကျိုး ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်း ကနေ မိမိအကျိုးစီးပွား ဆိုတဲ့ ဥိးတည် လမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားပြီး ၊ အပူဇော်ခံရအောင် လုပ်တာတွေ ၊ နေရာရအောင်လုပ်တာတွေ ၊ ထင်ပေါ် ကျော်ကြားအောင် လုပ်တာတွေ ၊ ကိုယ့်အတွက်ပဲ အကျိုးရှိအောင် လုပ်တာ တွေဟာ တတိယ တပ်မ ရဲ့ စစ်ရှုံး သုံးပန်းတွေ ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ဖြစ်လာရပါတော့တယ်..။
ကိုယ့် အတွက် အင်မတန်ခက်ခဲလှတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြတ်မြတ်တဲ့ ပါရမီသဘော နဲ့ ဖြတ်ကျာ် ရဲရင့်ခဲ့တဲ့ .......
မာရ်နတ် ရဲ့ တတိယတပ်မ ( ခုပ္ပိပါသာ) ကို ကျော် လွှားအောင်မြင်တော်မူခဲ့တဲ့....
ဘုရားရှင် ရဲ့ နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ သည် စာစုဖြင့် ရိုကျိုးလေးမြတ်စွာ ဦးညွှတ် ပူဇော် လိုက်ပါရစေဘုရား။
ဓာတ်ပုံ= ရွှေကျီးမြင်ဘုရား ၊ မန္တလေး
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 9:37 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:54 AM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ခေါင်းစဉ် ဥဒါန်း တရားတော်များ
နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း( အ-ရတိ)
( ဆရာကြီးဦးရွှေအောင် ၏ လောကသားတို့ ၏ အနှိုင်းမဲ့ကျေးဇူးရှင်၊ စာ ၁၆၆ မှ အတွေးအခေါ် ၊စာသားတို့ကို ကိုးကားရေးသားပူဇော်ပါသည်။)
မာရ်နတ် ၏ ဒုတိယ တပ်မ မှာ (အ-ရတိ ) ဖြစ်ပါတယ်။ နေက္ခမ္မ သဘောဖြင့် အများအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် ကြတယ် လုပ်ဆောင်ရင်း ဖြင့်ပဲ တခါတခါ တွင် ထို လုပ်ငန်းမှာ မမွေ့လျော်တော့ခြင်း-အ- ရတိသဘော သည်ဖြစ်တတ်လေ့ရှိပါတယ်..။
လူ -ဆိုတာကတော့ မိမိ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ပါတဲ့ ကိစ္စ တွေ မှာ သာမွေ့လျော် တတ်ကြတာသဘာဝပါ..။ အများအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ မှာ မွေ့လျော်ခြင်းမရှိတတ်ကြ..သလို စိတ်ဝင်စားခြင်းလည်းမရှိတတ်ကြပါဘူး။
တကယ်တော့ကိစ္စ တိုင်းလိုလို မှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ရတိ သည် ရှိမြဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
မိမိ အတွက်သာ အာရုံပြုထားပါက *ကာမရတိ* ကို ပဲတွေ့ရပါမယ်။
လောက အတွက်ဆို *ဓမ္မရတိ* ကိုတွေ့ ရပါမယ်..။့ 
လူတွေ အများစုကတော ( မိမိ အကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ တွင်သာ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ရတိ ရှိကောင်း၏ ။ အများ ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်သော လုပ်ငန်းများ မှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ် -ရတိသည် မရှိကောင်း ) ရယ်လို့ ပဋိသန္ဒေ္စ ဥာဉ် နဲ့ စရိုက် အလိုက် ခံယူထားတတ်ကြ ပါတယ်။
ထို ခံယူချက် အတိုင်းပင် အများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင် စိတ်ဝင်စားဘွယ် ရတိ ကို မတွေ့ကြပါ။ အဲဒီအခါ မျိုးမှာ အများ၏ အကျိုးစီးပွားအတွက် လုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင်မမွေ့လျော်ခြင်း(အ-ရတိ) ကို တွေ့ ရပါလေတော့တယ်..။
ထို အ-ရတိကို တွေ့တာ နဲ့ တပြိုင်နက် ထို လုပ်ငန်းတွေကနေ အကြောင်း အမျိုးမျိုး ပြပြီး ရှောင်ခွာ သွားကြပါတယ်။ ဒါ ဟာ မာရ်နတ် ရဲ့ ဒုတိယ တပ်မ မှာ ကျဆုံးခြင်း ပါပဲ..။
ဒါဆိုရင် ( ရတိ) ကို ဘယ်လို ရှာမလဲ … ကျွန်မသိချင်လှပါတယ်..။
တကယ်တော့ကိစ္စ တိုင်းလိုလို မှာ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ရတိ သည် ရှိမြဲ ဖြစ်တာကို သတိထားဆင်ခြင် ရပါမယ်..။
ကိစ္စ တိုင်းမှာ (ရတိ) ရှိ နေတယ် ဆိုတာ ကိုလည်းယုံကြည်ဘို့ လိုအပ်လှပါတယ်..။
ယုံကြည် ရုံ နဲ့မပြီးသေးဘူး ထို (ရတိ) ကို ရှာဖွေလိုသော ဆန္ဒ လည်းရှိရပါအုံးမယ် ။
ရှာလိုသော ဆန္ဒ ရှိ ရုံ နှင့်မပြီးသေး ပဲ တွေ့အောင်ရှာမည် ဆိုတဲ့ ခိုင်မာ တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိရပါမယ်။
ခိုင်မာ တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ရှိရုံ နဲ့မပြီးသေး ၊ ဇွဲလုံ့လ ၊ဝီရိယ ရှိမှသာ တွေ့ နိုင်တာမျိုးပါ..။
တကယ်တော့ လည်း ၊ ဇွဲလုံ့လ ၊ဝီရိယ အပြင် ရှာဖွေ တတ်သော အသိဥာဏ် ပညာ လိုအပ်ပြန်ပါသေးတယ်။
ရှာဖွေ တတ်သော အသိဥာဏ် ပညာ ရှိရုံနဲ့ မပြီးသေးပဲ.....................
လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့် တိုးတက် မှု ဆုတ်ယုတ်မှု ၊ အခြေ အနေများကို အစဉ် သတိပြု ပြီး ရှာဖွေ မှ သာ စိတ်ဝင်စားဘွယ် ( ရတိ) ကိုတွေ့ နိုင်ပါတော့တယ်..။
ကဲ--- မာရ်နတ် ရဲ့ ဒုတိယ တပ်မ မှာ မကျဆုံးရလေအောင် ကြိုးစားပမ်းစား၊ စိတ်အားမွေးကာ ( ဓမ္မရတိ) ကို ရှာဖွေကြပါစို့လား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:10 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း ( ဝတ္ထုကာမ၊ ကိလေသာကာမ)
ကျွန်မ တို့အားလုံး ရဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာ ဘုရားရှင် ဖြည့်ကျင့် ခဲ့တဲ့ ပါရမီ တော် (၁၀)ပါး ထဲက နေက္ခမ္မပါရမီ ကို ဒီနေ့ ဖတ်ရှု ပူဇော် မိပါတယ်..။ *ငါးပါးမာရ်ညွှန့် ၊ ရန်အ၀ှန့် ကို မရွံ့ မထိတ် ၊ ခြင်္သေ့စိတ် ဖြင့် * ဆွဲဆောင်မှု များမှ ရုန်းထွက် အောင်ပွဲ ခံ ခဲ့တာ ဒီပါရမီ ကိုဖြည့်ကျင့်ခဲ့လို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
နေက္ခမ္မ ဆိုတာ ပါဠိ ဝေါဟာရ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာ ပြန် အနက်အားဖြင့် ဆိုလျှင် * ဆွဲဆောင်မှု များကြားမှ ရုန်းထွက်ခြင်း * လို့ နားလည် ရပါမယ်။ ရုန်းထွက်တယ် ဆိုတာ မိမိ အကျိုးစီးပွားအတွက် ရုန်းထွက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ လော က လူသားအားလုံး ရဲ့ အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ရွက် နိုင်ရန် ဆွဲဆောင်မှု များအားလုံးမှ ရုန်းထွက်ခဲ့တာ မို့ နေက္ခမ္မ ပါရမီမြောက် တဲ့ ရုန်းထွက်မှု ရယ်လို့ ကြည်ညို မိပါတယ်..။
ရုန်းထွက် ရမဲ့ ဆွဲဆောင်မှုတွေ ကလည်း တပ်မက်စရာ လောကထဲပြည့်နှက်နေတာပါ။ ကျွန်မတို့ လို နုနယ် တဲ့ပါရမီ နဲ့ ချိနဲ့နဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်တွေ နဲ့ အများအကျိုးဆောင်ရွက် တာမျိုး ဆိုတော့လည်း မာရ်နတ် ရဲ့ တပ်မ ၁၀ ခု အောက်မှာ အလဲလဲအပြိုပြို ရှုံးနိမ့် ရပါတယ်..။အဲဒီအခါတိုင်းမှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် ရဲ့ ရင်ဆိုင်ပုံနည်းလမ်း တွေကို အတုယူပူဇော် ဦးခိုက်ဖြစ်ပါတော့တယ်..။
ဝတ္ထု ကာမ နှင့်ကိလေသာ ကာမ တွေကတော့ မာရ်နတ် ရဲ့ ပထမ တပ်မ ဖြစ် ပါ တယ်။ *ဝတ္ထုကာမ* ဆိုတာကတော့ တပ်မက်စရာကောင်းလှတဲ့
စည်းစိမ် ၊ဥစ္စာ ၊
အများတကာ က ဝိုင်းဝန်းလေးစားခြင်း ခံရမှုများ ၊
ထင်ပေါ်ကျော်စော မှု များ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။
*ကိလေသာကာမ*ဆိုတာကတော့ တပ်မက်စရာတွေအပေါ် တပ်မက်တဲ့ စိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့လည်း ဝတ္ထု ကာမ တွင်ပါတဲ့ လာဘ် သပ်ပကာ များ ၊ ဘွဲ့ ထူး ဂုဏ်ထူးများ ၊ရာထူးဂုဏ်သိမ် တွေက သာမန် သူတော်စင်ကိုပင် ဟန်ချက်ပျက်အောင် ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတတ်ကြပါတယ်..။
ထိုသို့ ရုန်းထွက်ရာ မှာ ပစ္စည်းဥစ္စာ များစွန့်ခြင်း မှလည်း ရုန်းထွက်နိုင်ပါ၏ ။ ခြေလက် အင်္ဂါ များကို စွန့်ခြင်းဖြင့်လည်းရုန်းထွက် နိုင်၏။ အသက်ကိုပင် စွန့်ခြင်းအားဖြင့် ရုန်းထွက်မှ ဖြစ်မည် ဆိုလည်း အသက်ကို စွန့် ပြီးရုန်းထွက် နိုင်သည်သည်သာဖြစ်ပါတယ် ။ ဘုရားရှင် တို့ ရဲ့ စွန့်လွှတ်မှု မျုိး ကတော့ပြတ်သားရဲရင့် တာချည်းပါပဲ။
နေက္ခမ္မ ပါရမီ အနေဖြင့် လောဘဖြစ်လာသည့်အခါ လောဘ အလို သို့ မလိုက်ဖြစ်အှောင် လောဘ ရဲ့ ဆွဲဆောင်ချက် မှရုန်းထွက်ရပါတယ်။
ဒေါသ ရဲ့ အလို သို့ မလိုက်ဖြစ်အောင် ဒေါသ ရဲ့ ဆွဲဆောင်ချက် မှရုန်းထွက်ရပါတယ်။
မောဟ ရဲ့ အလို သို့ မလိုက်ဖြစ်အောင် မောဟ ရဲ့ ဆွဲဆောင်ချက် မှရုန်းထွက်ရပါတယ်။
မာယာ၊ သာဋ္ဌေယျ ၊ ဣသာ ၊ မစ္ဆရိယ စတဲ့ကိလေသာ များဖြစ်လာ တဲ့အခါ မှာလည်း သူတို့ ရဲ့ အလို ကို မလိုက်ဖြစ်အောင်ရုန်းထွက်ရတာပါပဲ။ အဲလို ရုန်းထွက်နိုင်ဘိ့ဆိုတာ လွယ်လှတာတော့မဟုတ်ပါဘူး ။ မလွယ်ပေမဲ့ နေက္ခမ္မ ပါရမီ သဘောနဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် သည် လေးသင်္ချေ ကမ္ဘာ တစ်သိန်းတိုင်တိုင် လေ့ကျင်ခဲ့ပါတယ်..။ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပါတယ်..။ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..။ နောက်ဆုံး အောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်..။
တကယ်တော့လည်း ပါရမီ (၁၀) ပါးလုံး မှာ ရုန်းထွက်တယ် ၊ စွန့်လွှတ်တယ် ဆိုတဲ့ နေက္ခမ္မ သဘောပါမှ သာ ပါရမီ ထိုက်တဲ့ ကျင့်စဉ် ဖြစ်ရပါတယ်..။
ကျွန်မတို့ မှာ လည်းအရိယာ မဖြစ်သေးသမျှ မှာ ဓမ္မတာ အရ ကိလေသာ တွေကို တွေ့ ကြုံနေရစမြဲပါ။ အဲဒီအခါ ထို ကိလေသာ တို့ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှု အလို ကို လိုက်ပါခြင်းမရှိပဲ ရုန်းထွက် နိုင်တယ် ဆိုရင်တော့ နေက္ခမ္မ သဘော ဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း ကို လျှောက်လှမ်းမိ ရမှာပါ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင် မည်သို့ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ပါသနည်း ၊ အဓိက လမ်းညွှန်ချက်ကို ကျွန်မ ပူဇော် ဥိးခိုက်လိုလှပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဘုရားရှင်က အများအကျိုးကို ဆောင်ရွက် တဲ့အခါ မှာ.....
((( မည်သည့်လုပ်ငန်း ကိုဆောင်ရွက် သည်ဖြစ်စေ ၊ ထိုလုပ်ငန်းမှ ရရှိသော အကျိုးကို မမျှော်ကိုး ပဲ မိမိတာဝန် အရ ၊မိမိ လုပ်ငန်းကို ၊ လောက အတွက် လုပ်ခြင်းဟူ၍ လုပ်ငန်း ၌ သာ ၊ လေးလေးစားစား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ))) ဆိုတဲ့ ပဓာန ကျတဲ့ ခံယူချက် နဲ့ ရုန်းထွက် ခဲ့ပါတယ် ၊ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..။
ထို အခါ မှာ မိမိ အကျိုးကို ပဓာန မထားတဲ့အတွက် တပ်မက်ခြင်းလောဘသည်လည်းမဖြစ်လာ။
တွေ ဝေခြင်း မောဟလည်း ဖြစ်မလာ ။
တခြားသောကိလေသာ များသည် လည်းဖြစ်မလာတော့ ပါဘူး။
ထို ကိလေသာများ မှာ ခေါင်းဆောင်ကတော့ လောဘ ပါပဲ ။ သူခေါင်းဆောင်ရင် သူ့နောက်က ကျန်တဲ့ကိလေသာ တွေ လိုက်ကြတော့တာပါ..။
သူတို့ နဲ့ ထာဝစဉ် နပမ်း လုံး အရှုံပေး နေကျ ကျွန်မ တို့ကတော့ ဘုရားရှင် ရဲ့ ရုန်းထွက်မှု* နိက္ခမ္မပါရမီ* ကို ကြည်ညို ဦးခိုက် မဆုံး နိုင်ပါ..။ လေးစားမြတ်နိုးမှု သည် လည်း အတိုင်းအဆ မရှိ ။ ခံစားနားလည် ခြင်းဖြင့်လည်း ကြိုးစားလို စိတ်တွေ ဖြစ်ရပါတယ်..။
မာရ်နတ်၏ ပထမ တပ်မပါတကား ။
ဒုတိယ တပ်မ *အ-ရတိ*ကို ဆက်ပါအုံးမည်။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 7:07 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ဆင်းရဲနုံချာသူတို့ အားစောင့်ရှောက်တော်မူတတ်သော ကရုဏာ နှလုံးသား ( အရှင်မဟာ ကဿပမထေရ်)
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ က ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်၊ မရမ်းချောင်းကျေးရွာ မှာ အနာကြီးရောဂါ ဝေဒနာသည်များကို ပြုစု စောင့်ရှောက်ထားတဲ့ မေတ္တာပရဟိတ ဂေဟာ မှာ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး က တရားချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါတယ်…။
တရားပွဲပြီး လို့ ဆရာတော်ဘုရားပြန်မကြွခင်ကလေး မှာ မပီသ တဲ့အသံလေး နဲ့လျှောက်ထားသံတစ်ခုကို ကျွန်မတို့ကြားလိုက်ရပါတယ်.။ (တပည့်တော်တို့ က လူတွေ တောထဲ ရောနှောသွားလို့မဖြစ်တာမုိ့… တရားပွဲကို တစ်နှစ်တစ်ခါ ချီးမြှင့်တော်မူပါဘုရား) တဲ့..။
တုန်ယင်လှိုက်လှဲ တဲ့ အသံ ဟာ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကရုဏာ နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ် မှာအမှန်ပါ..။ကျေးဇူး နဲ့ သံသရာ အဓိပ္မါယ်တွေ လေးနက်အောင်ဖွင့်ဆို တတ် တဲ့ ဆရာတော်ဘုရားကတော့ မတော်ဘူးတဲ့အမိ ၊မတော်ဘူးတဲ့အဖ စကားဖြင့် မိဟောင်း၊ ဖဟောင်းလို သတ်မှတ် မှာပါ...။ရင်ထဲ မှာ ကရုဏာဖြင့် ဆို့နင့်နေခဲ့ကြောင်း ဆရာတော်ဘုရားကအပြန်လမ်းမှာ မိန့်တော်မူခဲ့ပါတယ။
ဒီနှလုံးသွင်းမှုကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ..ကျွန်မ အလယ် လမ်းတစ်လျှောက် ကို ကင်မရာချိန်လိုက်စဉ် မှာ ဆရာတော်ဘုရား ကခေါင်းလေးငုံ့ ခါးလေးရို့ ကာ လျှောက်လှမ်းတော်မူ တာတွေပါလိုက်ရပါတယ်..။
ဒီမြင်ကွင်းလေးကို မြင်လိုက်ရ တဲ့အချိန် မှာ ကျွန်မ ဟာ အားနည်းရှာသူ ကျောမွဲ လူတန်းစား ကို ထာဝစဉ်ကူညီစောင့်ရှောက်လေ့ရှိတဲ့ မထေရ်မြတ်တစ် ပါးကို သတိရမိပါတယ်..။
ကံမွဲ ၊ဥာဏ် နုံနဲ့ကြသူများကို စောင့်ရှောက် တဲ့ မထေရ်မြတ်ကတော့ ဘုရားရှင်ရဲ့ သာဝက ထဲ မှ ရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ကိုယ်တော်တိုင် က ရတတ်သမျှ ၊ ဆွမ်း၊သင်္ကန်း၊ကျောင်း၊ဆေး ပစ္စည်းလေးပါး၊ နဲ့ရောင့်ရဲတော်မူ ပြီး ကံနိမ့်သူဆင်းရဲသား များကို ချီးမြှင့်မြှောက်စားလိုတဲ့စေတနာ နဲ့ ကရုဏာကြောင့် ဆင်းရဲသားရပ်ကွက်ထဲမှာ ပဲ ဆွမ်းခံလှည့်လည်တော်မူပါတယ်။
အရှင်မဟာ ကဿပ မထေရ်မြတ်ဟာ အမျိုးမြတ်သူ၊ ပညာတတ်သူ၊ ဥစ္စာပေါသူ၊ ရုပ်ချောသူ ဧတဒဂ် ဘွဲ့ ရ တတိယ မဟာသာဝက ရဟန္တာ အရှင်မြတ်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်..။
ရဟန်းဘဝ မရောက်ခင် မှာ လည်းပိပ္မလိလုလင် နာမည် နဲ့ ဘဒ္ဒကပ္မိလာနီ တို့ ရဲ့ ပန်းကုံးခြား ပြီးအိပ်ယာဝင်ကြတဲ့ဇာတ်လမ်း ကို တော့လူသိများကြမှာပါ..။ကာမဂုဏ်အာရုံတွေကို မခင်တွယ်၊ မိဘ အလိုကျ လက်ထပ်ခဲ့ရလို့ အကြင်လင်မယား ဘဝရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ နှစ်ဦးသားကြားမှာ ပန်းတွေ ခြား ကာ လုံးဝ မညှိုးနွမ်းစေတဲ့ အရှင်မြတ်ပါ.။
ရံဖန်ရံခါ နိရောဓသမာပတ် ဝင်စားတော်မူပြီး သမာပတ် မှ ထတော်မူ တဲ့အခါ ဆင်းရဲသားတို့ ရဲ့ ဆွမ်းအလှူ ကုသိုလ် ကြောင့် တိုးတက်မြင့်မားသွားစေရန် ဆွမ်းခံပြီး စောင့်ရှောက်တော် မူပါတယ်..။
ဆွမ်းခံကြွ တဲ့အခါ မှာလည်း ( ဒီကနေ့ မှာ ဆင်းရဲသားတစ်ဦးဦး ဟာ စစ်သူကြီးရာထူးကိုသော်လည်းကောင်း၊ သူဋ္ဌေးကြီးရာထူးကိုသော်လည်းကောင်း ရပါစေ )ဆို တဲ့နှလုံးသွင်းနဲ့ ရပ်ကွက် ထဲက အဆင်းရဲဆုံးမိသားစု ထံ ဆွမ်းခံခြင်းဖြင့်ချီးမြှောက် တော်မူပါတယ်..။
အရှင်မြတ် ရဲ့ချီးမြှောက်မှုကြောင့် ရာထူးရာခံတွေ ရကုန် ကြသလို နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီးနတ်သားတွေ ဖြစ်ကုန်ကြ တာလည်းအမျာကြီး ရှိပါတယ်..။
ဒီလို သတင်းကျော်ကြားလေတော့ တာဝတိံသာ မှာနတ်သမီး ၅၀၀ ကဆွမ်းအုပ်တွေ ကိုယ်စီ နဲ့ လောင်းလှူမယ် ကြံစည်ကာ လမ်းမ တွေ ထက်မှာ စောင့်ဆိုင်းကြပါတယ်..။ အရှင်မြတ်သည် နတ်သမီးမှန်းသိတာ နဲ့ လုံးဝ လက်မခံ ပဲ နေပါတယ်..။
(ဆင်းရဲသားဝေစု၊လုမယူကြနဲ့ ။) လို့ပြစ်တင်မောင်းမဲ နှင်ထုတ် တော်မူပါတယ်။
ဒီသတင်းကို သိတဲ့ သိကြာမင်းနဲ့ သုဇာတာ ကတော့ ဆင်းရဲသားအဘိုးအို အဖွားအိုလိုအယောင်ဆောင်ကာ လှူဒါန်းလိုက်ပါတယ်..။ သပိတ်ထဲက ဆွမ်းက အမွှေးနံ့ ရတော့မှ မထေရ်မြတ်က သိကြားမင်းမှန်းသိတော့ နောင်ဒီလို မသမာ မှုမျိုးကို မကျူးလွန်ဘို့ သတိပေးစကားဆိုတော်မူဘူးပါတယ်..။ ဆွမ်းကလက်ခံပြီးပြီ မို့ သိကြားမင်းကတော့ အလှူ အထမြောက်တာ လက်ခမောင်းခတ် ဝမ်းမြောက်ရှာပါတယ်..။
တနေ့မှာတော့ ဆွမ်းဒကာ က ဆင်းရဲ တာတို့ထက်သာလွန်ပြီး ဆင်းရဲရှာသူ နူနာသည်တစ်ဦးပါ..။သူက အများနည်းတူ ဆွမ်းလောင်းချင်ရှာ ပါတယ်..။မရမ်းချောင်း က ဝေဒနာသည်တွေလိုပေါ့နော်..။ ပြတ်ကျလုနီးပါး သွေးပြည်တွေ ယိုစီးနေတဲ့လက် နဲ့ တစ်လုပ်စာ ဆွမ်းကိုလောင်းလှူတာမို့ ဆွမ်းနဲ့အတူ လက်ချောင်းပြတ်ကလေးဟာ သပိတ်ထဲ ပါသွားခဲ့ပါတယ်..။ လက်ချောင်းပြတ်ကလေးကို အသာဖယ်ပြီး ဆွမ်းကို ရွံရှာ စက်ဆုပ်ခြင်း လုံဝ မရှိပဲ ဘုဉ်းပေးတော်မူပါတယ်..။
ကံမကောင်း ၊ အကြောင်းမလှရှာသူ ၊ မျက်နှာ ငယ်ကြတဲ့ ဆင်းရဲသား လူမွဲ တွေကို တကူးတက ရွေးချယ်ပြီး သနားကရုဏာတော် နဲ့ ချီးမြှောက်တတ်တဲ့အလေ့အကျင့် ဟာ လွန်စွာ မှ ချစ်ခင် ကြည် ညို ဖွယ်ကောင်းသလို ၊ အတုယူဖွယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်..။
(((ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးတစ်ယောက် ဟာ ၊သိက္ခာ ရှိပြီး ၊တကယ်လေးစားလောက်တဲ့ ၊သူတော်ကောင်းနှလုံးသားရှိသူ ဟုတ်မဟုတ် ၊ အကဲဖြတ်ချင်ရင် ၊ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သူ့လောက် ကံမကောင်းတဲ့ သူတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လိုပုံစံ နဲ့ ဆက်ဆံသလဲ ဆိုတဲ့အချက် နဲ့ အကဲခတ် ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်)))) လို့ ပညာရှင် တစ်ယောက် က ဆိုမိန့်ခဲ့ပါတယ်..။
ရွေးချယ် ခွင့်တွေများပြားခဲ့သော်လည်းတမင်တကာ ၊တကူးတက မေတ္တာကြီးမား၊ ကရုဏာ ထားတော် မူတဲ့ ဓုတင်အရာဧတဒဂ်ရ ၊တတိယ မဟာသာဝက ရှင်မဟာ ကဿပ မထေရ်မြတ်ကြီးကို ရိုကျိုးစွာ ဦးညွှတ်ကန်တော့ အပ်ပါတယ်..။
ဆင်းရဲချမ်းသာ၊ အနီးအဝေး၊ အယုတ်အလတ် အမြတ်မရွေး ချီးမြှင့်ကြွရောက်ပေးတဲ့ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရားကြီး ကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားရဲ့ ကျေးဇူးဂုဏ်ကို ရည်မှန်း တန်ဘိုးထား လို့ ရိုသေစွာ ကန်တော့အပ်ပါတယ်…။
ဆင်းရဲသား တို့ကိုးကွယ် ရာသူတော်ကောင်းများ ပေါများကြပါစေရန် ဆုတောင်းလျက်..။
တရားအလှူ၊ အစားအလှူတို့ဖြင့် ဆင်းရဲနုံချာသူတို့အား စောင့်ရှောက်လှူဒါန်းကြတဲ့ ရွှေရန်ကုန် ပရဟိတအသင်း ကို လည်းအထူးဂုဏ်ပြုအပ်ပါတယ်..။(( ရွှေရန်ကုန် မှ ဆရာတော်ဘုရားအား ရိုသေစွာ....ကပ်လှူပူဇော်ကြပါတယ်..။ မရမ်းချောင်းရွာ...မေတ္တာပရဟိတဂေဟာ။၂၃.၃.၂၀၁၄- ဓာတ်ပုံ)
==ဆရာတော်ဝင်နွယ် ၏ သူတော်ကာင်းတို့နှလုံးသား ကို ကိုးကားရေးသားအပ်ပါတယ်..။==
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:35 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
အရှင် နန္ဒ မဉ္စူသာဘိဝံသ ၏ အမြဲ မပြတ် ဆင်ခြင် သုံးသပ်အပ်သော သံဝေဂလင်္ကာ
အဘိဓဇ မဟာရဋ္ဌ ဂုရု ၊ အရှင် နန္ဒ မဉ္စူသာဘိဝံသ ၏
အမြဲ မပြတ် ဆင်ခြင် သုံးသပ်အပ်သော သံဝေဂလင်္ကာ
၁။ သန္ဒေ္စဇာတိ စွဲလာ ဘိက ၊ ဗျာဓိလက်နက် ၊ သူ့ဒဏ်ချက်ကို ၊ တစ်ရက်ရက် တွင် တွေ့ မြဲပင်တည်း ။
ငြိုငြင်ပင်ပန်း၊ လွန်ညှိုးနွမ်းလျက် ၊ မကျန်းမမာ ၊ငါခန္ဒ္စာသည် ၊ ဦးစွာ ဇာတိရှိသောကြောင့်..။
၂။ မြေ၊ ရေ၊ လေ၊ မီး သူဦးစီးလျက် ၊ဓာတ်ကြီး လေးခု၊ ညီညွတ်မှုကြောင့် ၊ ပြုလုပ်သွားလာ ဤခန္စ္ဒာကား၊ လေးဖြာ ဓာတ်ချက်၊ တစ်ခု ပျက်က ၊ ခြေလက်မသယ် ၊စက်ခန်းလယ် ၌ ၊ ညှိုးငယ် လှိုက်ဖို၊ လွန် ငြင်ငြိုသည် ၊ ငါ့အလို မလိုက်ပါတကား။
၃။ ဓာတ်ကြီးလေးတန်၊ အမာခံ၍ ၊ အရံရုပ်သေး နှစ်ဆယ့်လေးတို့ ၊ ရောထွေးပေါင်းချုပ် ၊ ဤကိုယ်ရုပ်ကား ၊ သမုဋ္ဌာန ၊သဘာဝဖြင့် ၊ စိတ်ကပြုစု၊ဥတုစီမံ ၊ ကံအမိန့်ပေး၊အစေးအဟာရ၊ ပြုသမျှကို လုံးဝလိုက်ကာ၊ ခံရရှာ၍ ၊ ရောဂါထိုထို ၊ဝင်လာခိုသည်၊ ငါ့ကိုယ် မဟုတ်ပါတကား။
၄။ ငါ့ကိုယ်၊င့ါဟာ၊ ငါ့ဥစ္စာ ဟု သက္ကာယငြိ၊ စွဲထင်မိလည်း ၊ ဗျာဓိဆိုက်လာ ၊ ခုအခါ၌ ၊ မနာစေသား၊ မဖျားစေလို၊ မငြိုငြင်ရေး၊ အမိန့်ပေးလည်း ၊ အလေးဂရု၊ ဘိတ်မပြုခဲ့။ သူ့ဘာသာပင် ၊သူ့စိတ်ထင်တိုင်း၊ ဖျားချင်ဖျားကာ၊နာချင်နာလျက် ၊ ရောဂါအမျိုးမျိုး ၊ထင်တိုင်းတိုးသည် ။ အစိုးမရပါတကား။
၅။တပည့်တပန်း၊ ရဟန်း သာမဏေ၊ ချစ်မိတ်ဆွေလည်း၊ မထေရ်ဘုန်းရှင်၊ ရောဂါဝင်က၊ ချစ်ခင်သည့်လျောက် ၊ ဘယ်နှစ်ယောက်မျှ ၊ ဝင်ရောက်ကူကာ၊ မခံသာရှင့်၊ ခန္ဒ္စာကိုယ်များ၊သီးအခြားမို့ ၊ ကိုယ်ဖျားကိုယ်ခံ ၊သူဆက်ဆံဘူ့၊ ရုပ်နာမ်နှစ်ခိုင်၊သူလက်ကိုင်သည်၊ ကိုယ်ပိုင်ဒုက္ခပါတကား။
၆။ အားအင်ပြည့်ကြောင်း၊လူတိုင်းတောင်းသည့် ၊ စားကောင်းသောက်ဖွယ် အသွယ် သွယ်ကား ၊ မတွယ် ရောဂါ၊ မာစဉ်ခါက ၊ ခန္စ္ဒာမိတ်ဖက် ၊အသက်သခင် ၊ အားအင်ပြည့်ဖြိုး၊သွေးသားတိုး၍ ၊ အားကိုးစရာ၊ ဖြစ်ခဲ့ပါလည်း ၊ ရောဂါပြောထူ၊ ခုတစ်မူကား၊ ရန်သူစစ်စစ် ၊ဖြစ်ကြီးဖြစ်၍ ၊ ရေနစ်သည့်သူ၊ ဝါးနှိပ်ကူ သို့၊ကိုယ့်လူမဟုတ်ပါတကား။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 6:30 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
ဘဝသောတံ (သို့) ရတနတ္တယ ဂုဏ ဝဏ္ဏနာ သစ္စ ဂါထာ
မနေ့က ညနေ ၅နာရီ မှ စင်္ကပူ ကပြန်ကြွလာတဲ့ ပိုင်းလော့ဆရာတော်ဘုရား ဟာ ည ၇နာရီမှာ တရားပွဲ ကြွဘို့ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်..။
ကျွန်မ တို့ လှူဒါန်းတဲ့ ပဒေသာပင်ကိုရေစက်ချအပြီးမှာတော့ တရားပွဲ ကိုမနားပဲ ထွက်ခွာပါတယ်..။
သူတော်ကောင်းတွေ ဟာ အများအတွက် အလုပ်လုပ်ကြတာ အတုယူမိပါတယ်..။
ကျွန်မ မလဲ အင်းလေး နဲ့ မဲခေါင် အင်စတီကျူ ခရီးစဉ်တွေရှိနေတာနဲပ အထုပ်ပြင်ရပါတယ်..။
ခရီးစဉ် တွေသွားဘို့ ထုပ်ပိုး ပြင်ဆင် ရလေတိုင်း ငယ်ငယ် ကရွတ်ဆို ခဲ့ဘူးတဲ့ ဘဝသော တံ အစချီတဲ့ ဂါထာ လေးကို ရွတ်ဆို ပူဇော်ဘို့ ကျွန်မ သတိရမြဲပါ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူခဲ့ တဲ့တရားတော် တွေ ထဲ မှာ ဂါထာ တွေဟာ ကဗျာတွေပါပဲ..။ စကားပြေ ကိုတော့စုန္နိယ လို့ ခေါ်ကြောင်း မှတ်သားဘူးပါတယ်..။ ခရီးသွားဓမ္မကဗျာလေးပေါ့နော်..။
*ရတနတ္တယ ဂုဏ ဝဏ္ဏနာ သစ္စ ဂါထာ* လို့ခေါ်ပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် ဂေါတမ ဘုရားရှင်လက်ထက် မှာ မဟာကပ္ပိန မင်းကြီး အမတ် (၁၀၀၀) နှင့် တကွ မြင်းကိုယ် စီ စီးပြီး ဘုရားရှင် ထံအဖူးမျှော်ကြွရောက်စဉ် မှာ အသွားလမ်းခရီးအကြားဝယ် မြစ်သုံးတန်ခြားနေပါသောကြောင့် ရွတ်ဆို ခဲ့တဲ့ ဂါထာ ပဲဖြစ်ပါတယ်..။
ကျေးဇူးတော်ရှင် မင်းကွန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး ( အဘိဓဇ မဟာ ရဋ္ဌ ဂုရု ဘွဲ့ တံဆိပ်တော်ရ ဓမ္မဘဏ္ဍာ ဂါရိက အရှင် ဝိစိတ္တသာရာဘိဝံ ) ခရီး မသွားခင် (၃၂ )ခေါက်ပူဇော်လေ့ရှိပါသတဲ့..။
တစ်ခါက ဂေါ် ရခါးဒကာ တစ်ယောက် က တရားပွဲ တစ်ခု မှာ မင်းကွန်းဆရာတော် ထံပါး ချဉ်းကပ်ပြီး..* ဆရာတော်ဘုရား။ သာသနာပြု ခရီးစဉ် တွေ ကြွချီ နေတာ အမြဲ အောင်မြင် နေတာ..ဆရာတော် ကျင့်သုံး လေ့ရှိတဲ့ ကျင့်စဉ် အလေ့အထကောင်းတော့ရှိမှာပဲ ။ တပည့်တော် သိပါရစေဘုရားလို့ * လျှောက်တင်ပါသတဲ့။
အဲဒီအခါ ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ပြုံးပြီး…သိချင်ရင် လာ တောင်းလှည့် လို့ မိန့်ခဲ့ဘူးပါတယ်..။
ဒီဂါထာတော်မြတ်ကို ဆရာတော်ဘုရား ကိုယ်တိုင်ရေးသားပြုစုတော်မူတဲ့ မဟာကပ္ပိန မင်းကြီး အကြောင်းရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်မှာလည်းဖေါ်ပြထားပါတယ်..။
*ရတနတ္တယ ဂုဏ ဝဏ္ဏနာ သစ္စ ဂါထာ*
၁။ ဘဝသောတံ ဟဝေ ဗုဒ္ဓေါ တိဏ္ဏော လောကန္တဂူ ဝိဒူ၊
ဧတေန သစ္စဝဇ္ဇေ န ၊ ဂမနံ မေသမိဇ္ဈတု။
၂။ ယဒိသန္တိ ဂမော မဂေါ ၊မောက္ခော စ အစ္စန္တိကံ သုခံ ၊
ဧတေန သစ္စ ဝဇ္ဇေ န ၊ ဂမနံ မေသမိဇ္ဈတု။
၃။သံဃော ဝေ တိဏ္ဏ ကန္တာရော ၊ ပုညက္ခေတ္တော အနုတ္တရော၊
ဧတေန သစ္စ ဝဇ္ဇေ န ၊ ဂမနံ မေ သမိဇ္ဈတု။****
၁။ ဗုဒ္ဓေါ --- သဗ္မညု ဗုဒ္ဓ အမည် ရသည့် လောက ထွတ်ထား မြတ်ဘုရား သည်၊ ဟဝေ = စင်စစ် ဧကန်အမှန်ပင်၊ ဘဝသောတံ = ဘဝ သုံးသွယ် ရေပြင်ကျယ်ကို ။
တိဏ္ဏော = နိဗ္မာန် ထုတ်ချောက် ၊ မှ ကမ်းရောက်အောင် ကူးမြောက်တော်မူလေပြီ။
(ဝါ) ကူးမြောက် တော်မူပြီး ဖြစ်ရကား လောကန္တဂူ = လောကဓံ အဆုံးသို့ နှလုံးကြည်ဖြူ ဆိုက်ရောက်တော်မူလေပြီ။
ဝိဒူ= ခပ်သိမ်းသော တရား တို့ကို ပိုင်းခြားထင်ထင် သိမြင်တော်မူလေပြီ။
ဧတေန သစ္စ ဝဇ္ဇေ န = ဝစီမင်္ဂလာ သစ္စာစကားကြောင့် ၊ မေ အကျွန်ပ်၏ ၊ ဂမနံ = ခရီးသွားခြင်းကိစ္စခပင်းသည် ၊ သမိဇ္ဈတု - သိဒ္ဒ္စိ ဝှန်ထောက် တံခွန်ဆောက်၍ ပြီးမြောက်ကုံလုံပြည့်စုံပါစေသတည်း ။
(ဝါ) အန္တရာယ် မမှောက် ၊ ရန်မနှောက်ပဲ ထမြောက် ကုံလုံ ပြည့်စုံပါစေသတည်း။
၂။ မဂ္ဂေါ = လောကုတ္တရာ အရိယာ မဂ်လေးပါးသည် ၊ယဒိဇာတု = စင်စစ် ဧကန် အမှန်ပင် ၊ သန္တိ ဂမော = နိဗ္မာန် ထုတ်ချောက် ရောက် စေနိုင်၏။ မောက္ခောစ = အရိယာမဂ် ဖြင့် ရောက်အပ် နိဗ္မာန် တရားမြတ် သည် လည်း၊ အစ္စန္တိကံ သုခံ = ချမ်းသာစစ်စစ် ဧကန်ဖြစ်၏ ။
၃။ သံဃော = ပရမတ္ထ အရိယာ သံဃာတော်မြတ် သည် ၊ဝေ= စင်စစ် ဧကန် အမှန်ပင် ၊ တိဏ္ဏ ကန္တာရော = သံသရာ ခရီးခဲ ကို အံ့ အဲ စလောက် ၊ ဘက်ကမ်းရောက်အောင် ၊ ကူးမြောက်ပြီး ဖြစ်တော်မူ ပေ၏။ အနုတ္တရော - အတု မရှိလွန်မြောက်ဘိသော ၊ ပုညက္ခေတ္တော = ကောင်းမှုမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြဲချရာ လယ် ယာမြေစစ် ပုညခေတ်လည်း ဖြစ်ပါပေ၏ ။
ဧတေန သစ္စ ဝဇ္ဇေ န = ဝစီမင်္ဂလာ သစ္စာစကားကြောင့် ၊ မေ အကျွန်ပ်၏ ၊ ဂမနံ = ခရီးသွားခြင်းကိစ္စခပင်းသည် ၊ သမိဇ္ဈတု = သိဒ္ဒ္စိ ဝှန်ထောက် တံခွန်ဆောက်၍ ပြီးမြောက်ကုံလုံပြည့်စုံပါစေသတည်း ။
ငယ်ငယ် ကတည်းကပူဇော်နေခဲ့တာ မြတ်မင်္ဂလာ စာစောင်မှာ ဖတ်ရကတည်းကပါ။ တစ်ခါ က ကုလသမဂ္ဂ လုပ်အားပေးတစ်ယောက် ရဲ့အတွေ့အကြုံကစိတ်ဝင်စားစရာရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးခေါင်းစဉ် လေးက *ပြည်ပရောက် ဘဝသောတံ* လို့ ရေးထားတာပါ။။သူ က ဘူတန် နိုင်ငံသင်ဖူးမြို့ ကနေခရီးထွက် ရတိုင်းမြေပြို ကျတတ်တဲ့ တောင်ဆင်းတောင်တက်လမ်း တွေ ဖြတ်ရတာမို့ သူကဒီဂါထာလေးကိုပူဇော်ပြီး မှ ခရီးထွက်ဖြစ်တာရေးထားတာမို့ ကျွန်မဒီဂါထာလေးကိုစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။အန္တရာယ် များလှပေမဲ့ ကပ်၍ တစ်ဖုံ၊ ရှောင်လို့ တစ်လွဲ… လွတ်ကင်းခဲ့ရတာများပါတယ်တဲ့..။ နောက်တော့ လည်းသူ့ကိုနောက် ကန်ထရိုက်သက်တမ်းမှာအလုပ်ပြန်မရအောင် မကြောင်းကြံစည် ခံရတဲ့ကြား က နေသူကအလုပ်ပြန်ရခဲ့တာ ဒီဂါထာလေးပူဇော်လို့ ဆိုတာယုံကြည်ပါကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်..။
နောက်တော့လည်း တိုက် ဆိုင်တယ် ပဲပြောရမလား…။ကျွန်မ ရန်ကုန် ပရိယတ္တိသာသနာ့ တက္ကသိုလ် စာအုပ်အရောင်းဆိုင် မှာဒီအကြောင်းလေးဆောင်းပါးလေးနဲ့ အတူစာအုပ်ကလေးအဖြစ်ထုတ်ဝေထားတာဝမ်းသာအားရတွေ့ ရပါတယ်။ အဲတာနဲအုပ်ရေ ၁၀၀ ဝယ်ယူပူဇော် ကာဓမ္မဒါနဝေငှဒါန ပြုခဲ့ပါတယ်..။
ထိုစဉ်က ကျွန်မတို့ စိုက်ပျိုးရေး ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတွေ မှာဘဝရဲ့ တိုးတက်ရာထွက်ပေါက် အဖြစ် နိုင်ငံခြားပညာတော်သင်၊ ပညာသင်ဆုကိုမျှော်လင့် ကြရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်..။ ရခဲ့ရင်ပဲဝန်ထမ်းဘဝမှာထီဆုပေါက်သလိုဝမ်းသာပျော်ရွှင် ကြတဲ့အချိန် ဖြစ်နေတာနဲ့ ကျွန်မလည်းကျောင်း(ထိုစဉ်က- သာယာဝတီ-စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ) ကလုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် ဆရာမမများကိုဓမ္မဒါန ပြု လိုက်ပါတယ်..။
ဆရာ-ဆရာမများထဲမှာ ၄ ဦးတိတိ ကျွန်မထံကို ပြန်လည် ပြောပြမျှဝေကြပါတယ်..။သီရိလင်္ကာသို့ တစ်ဦး။ ဂျပန်သို့ ၁၁ လ ပညာသင် ဆရာမတစ်ဦး၊ နိပေါ သို့ ၂ပတ် သင်တန်း၊ ထိုင်းသို့ လေ့လာရေးစတာတွေသွားရကြောင်းအပြင် ကျွန်မ မျှဝေထားတဲ့ စာအုပ်လေးကိုနွမ်းနွမ်းဖတ်ဖတ် ဖြစ်နေတာပါထုတ်ပြကြ တော့ ကျွန်မမှာလည်း ထပ်တူ ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ဒီလိုကုသိုလ်အကြောင်း ကြောင့်လားမသိ..သွားလိုက်ရတဲ့ခရီး….မရပ် မနားတစ်ဖားဖား …လွန်းထိုးပြေးသွားနေနေရတာ..။ တကယ်တော့ သွားရတယ် ဆိုသော်လည်းကမ္ဘာပေါ် မှာ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၀ ကျော် ရှိတာ ကျွန်မရောက်ဘူးနေဘူးတာ.. ၁၁ နိုင်ငံလောက်သာ…. ရှိသေးတာပဲလေ..။
ကျေးဇူးတော်ရှင်ပိုင်းလော့ဆရာတော် ဘုရားကမိန့်ဘူးတာ..။ သိပ်ရောက်ဘူးရဘူးတာတွေအဆန်းထင်မနေနဲ့တဲ့။ ဘဝသံသရာရှည်လွန်းတော့ မရောက်ဘူးတာ မရဘူးတာ ဘာမှမရှိတဲ့။
*မရသေးတာ နိဗ္မာန် တစ်ခုထဲသာကျန်တော့တာ.*.ကျန် တာအကုန် ဖြစ်ဘူး..ရဘူးတာချည်းပဲ..ဘာမှ အံ့သြစရာမရှိပါဘူးတဲ့..။ နွားဘဝခွေးဘဝ..ရှင်ဘုရင် ဘဝ။ သူဋ္ဌေးဘဝ၊ သူကြွယ် ဘဝ။ သူတောင်းစားဘဝ၊ မိဘုရားဘဝ…နတ်ဘဝ…ဗြဟ္မာဘဝ၊ အကုန်အကုန် မဖြစ်ဘူးတာတစ်ခု မှ မရှိတော့ပါဘူးတဲ့..။
တကယ်တော့လည်း နိုင်ငံခြားခရီးထက် ကျွန်မတို့အားလုံးသွားနေရတာ…. သံသရာခရီးသည်ဆိုတာလူတိုင်းပဲမဟုတ်ပါလား။ရောက်လေရာဘဝပေါင်းကြ။သင်းကြ။ရှာကြဖွေကြ နဲ့ နောက်ဆုံးအကုန် ထားခဲ့ရတာ…မွေးးခါစကလေးကနေ….ရုန်းရင်းကန်ရင်း ..အ်ုနာသေ…. ထပ်ချည်းတလဲလဲနဲ့ ညည်းငွေ့စ ရာခရီးသွားဘဝတွေ… ဘယ်တော့ ဆုံးနိုင်ပါတော့မလဲ..။
ဒီတစ်ခါ တော့ အရွယ်လည်းညောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ က မိတ်ဆွေ တွေကို မျှဝေချင်ပါတယ်…ဒီတစ်ခါတော့ နိုင်ငံခြားပညာတော်သင် သွားရဘို့ထက် ပိုလို့ လေးနက် တဲ့ ဘဝသုံးသွယ် ရေပြင်ကျယ် ကိုကူးခတ်လွတ်မြောက်နိုင်ကြဘို့ ပါ..။
(((ဗုဒ္ဓေါ --- သဗ္မညု ဗုဒ္ဓ အမည် ရသည့် လောက ထွတ်ထား မြတ်ဘုရား သည်၊ ဟဝေ = စင်စစ် ဧကန်အမှန်ပင်၊ ဘဝသောတံ = ဘဝ သုံးသွယ် ရေပြင်ကျယ်ကို ။
တိဏ္ဏော = နိဗာန် ထုတ်ချောက် ၊ မှ ကမ်းရောက်အောင် ကူးမြောက်တော်မူလေပြီ။
(ဝါ) ကူးမြောက် တော်မူပြီး ဖြစ်ရကား လောကန္တဂူ = လောကဓံ အဆုံးသို့ နှလုံးကြည်ဖြူ ဆိုက်ရောက်တော်မူလေပြီ။))) ကြည်ညို ဦးခိုက်ပါသည် ဘုရား။
(((မဂ္ဂေါ = လောကုတ္တရာ အရိယာ မဂ်လေးပါးသည် ၊ယဒိဇာတု = စင်စစ် ဧကန် အမှန်ပင် ၊ သန္တိ ဂမော = နိဗ္မာန် ထုတ်ချောက် ရောက် စေနိုင်၏။ မောက္ခောစ = အရိယာမဂ် ဖြင့် ရောက်အပ် နိဗ္မာန် တရားမြတ် သည် လည်း၊ အစ္စန္တိကံ သုခံ = ချမ်းသာစစ်စစ် ဧကန်ဖြစ်၏ ။ တရားတော် ကိုကြည်ညိုပါသည်ဘုရား။)))
(((သံဃော = ပရမတ္ထ အရိယာ သံဃာတော်မြတ် သည် ၊ဝေ= စင်စစ် ဧကန် အမှန်ပင် ၊ တိဏ္ဏ ကန္တာရော = သံသရာ ခရီးခဲ ကို အံ့ အဲ စလောက် ၊ ဘက်ကမ်းရောက်အောင် ၊ ကူးမြောက်ပြီး ဖြစ်တော်မူ ပေ၏။ အနုတ္တရော - အတု မရှိလွန်မြောက်ဘိသော ၊ ပုညက္ခေတ္တော = ကောင်းမှုမျိုးကို စိုက်ပျိုးကြဲချရာ လယ် ယာမြေစစ် ပုညခေတ်လည်း ဖြစ်ပါပေ၏ ။ သံဃာ ကိုကြည်ညိုပါသည်ဘုရား။))
သံသရာခရီးသည် ဘဝကနေ…. ရတနာ သုံးပါး ကို ဥိးခိုက် ကိုးစားလျက်..ဘဝ ပန်းတိုင်အဆုံးသို့ အရောက် လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေကြာင်းတန်ဆောင်မုန်းလပြည့်အကြို…ဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါရစေ..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:35 PM0မှတ်ချက်ရေးရန်
စာရေးဆရာ *ဓမ္မပါလ* ၏ *သူမရှိ ၊ငါမရှိ ပစ္စုပ္ပန် တည့်တ...
ဘုန်းဘုန်း အရှင် မဏိဇောတာလင်္ကာရ ( ရှင်မားရု) ၏ သြဝါ...
စွန့်ခွာ ထားရစ်….( အရှင်ကောဏ္ဍည သို့ ပူဇော်ဦးခိုက်ြ...
မကောင်းမှုပြုလေ့ရှိသူ (ပါပကာရီပုဂ္ဂိုလ်)သို့ ကရုဏာဗြ...
နေက္ခမ္မ ပါရမီသို့ ဦးညွှတ် ပူဇော်ခြင်း ( ဝတ္ထုကာမ၊ ကိ...
ဆင်းရဲနုံချာသူတို့ အားစောင့်ရှောက်တော်မူတတ်သော ကရု...
အရှင် နန္ဒ မဉ္စူသာဘိဝံသ ၏ အမြဲ မပြတ် ဆင်ခြင် သုံးသပ်...